ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 2010
ဒီဟင်းလျှာလေးတွေကတော့ ဘယ်တွေရောက်ရောက် တမ်းတလွမ်းရသော အမေ့လက်ရာ စစ်စစ် အညာဟင်းများဖြစ်ပါတယ်။ ရွာက ဟင်းလျှာတွေ၊ စားစရာတွေ နဲ့ပတ်သတ်လာရင် အနံ့လေးတွေကအစ မှတ်မိနေတယ်။ သတိတရ ရှိနေတဲ့ အမေ့လက်ရာ ဟင်းတွေ ချရေးလိုက်တယ်။ ကြားဖူးအောင်ပေါ့။
၁။ မန်ကျီးရွက် နုနုကို တောင်ပေါ်ပဲပြုတ်နဲ့ သုပ်တဲ့ မန်ကျီးရွက်သုပ်။
၂။ မန်ကျီးရွက် နဲ့ ခရမ်းခေါင်းသီး ချဉ်ဟင်း။
၃။ မိုးဦးကျထွက်တဲ့ ဆူးပုတ်နုနုနဲ့ ဆန်မုန့်ဟင်းချို။
၄။ မလွှပွင်၊ ကြောင်ရှာပွင့် ၊ ကြောင်ရှာသီး သုပ်။
၅။ ဂုဏ်ရွက်နုနုနဲ့ ဆန်မုန့် ဟင်းချို။
၆။ သဘာဝ ခွေးတောက်ရွက် ဟင်းချို။
၇။ ဟင်းနုနွယ်ရွက် ဟင်းချိုချို။
၈။ နွေမိုးဆောင်း လယ်ကန်စွန်းရွက်ကြော်။
၉။ ကိုင်းချဉ်ပေါင်နဲ့ ဆူးပန်း၊ နံနံ ချဉ်ဟင်းတစ်ခွက်။
၁၀။ ပဲတိုင်ထောင်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်း။
၁၁။ လက်ပန်ပွင့်ခြောက် (၀က်သားနဲ့မလဲနိုင်ပါ) ဟင်း။
၁၂။ ငရှာရွက် ဆန်မုန့် ဟင်းချို။
၁၄။ ခရမ်းခေါင်းသီး မီးဖုတ် မြေပဲဆံထောင်းပီးသုပ်။
၁၅။ ကဆစ်သီး မီးဖုတ် နဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း။
၁၆။ ကင်းမုံသီး ဆီပြန်ကြော်။
၁၇။ ပေါက်ပန်းဖြူ ၊ ပေါက်ပန်းနီပွင့် ဟင်းချို။
၁၈။ ကြက်သား နဲ့ ဗူးသီး ကာလသားချက်။
၁၉။ ကိုယ်တိုင်လုပ် ပုန်းရေကြီးသုပ်။
၂၀။ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက် ကလအော်ငရုပ်သီးနဲ့ချက်။
၂၁။ ဆူးပုတ်ကြီးရွက်နဲ့ ပဲကြီးဟင်းချို။
၂၂။ ဆောင်းဦးပေါက် နံနက်စောစော မီးပုံဘေးက ကောင်းညှင်းတပွဲ။
၂၃။ မြေပဲကြော်ကိုထောင်း ထမင်းပူပူနဲ့ နယ်၊ နှမ်းမှုန့်ဖြူး (ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး)။
၂၄။ ထန်းရေမှရသည့် ထန်းပုန်းရည်ကြီးချက် ။
၂၅။ လယ်ကြွက်ကင်၊ ထန်းပင်ကျရည်။
၂၆။ ဖားကင်၊ ထန်း ပင်ကျရည်။
(ဟင်းအားလုံးကို ချက်ပြုတ်ရာတွင် ဆုံဆီကိုသာသုံးပြီ မြေအိုးနှင့်ချက်သည်)
အရင်အဟောင်း ပိုစ်ဖြစ်၏ (ဆားချက်၏)။
DatE Sunday, September 19, 20100comments link this
တနင်္ဂနွေရဲ့ ရာသီဥတုက မိုးသားတိမ်တိုက်တို့ အုံ့ဆိုင်းလို့နေတယ်။ ဘယ်ကိုမှ သွားချင်စိတ် မရှိဘဲ အခန်းအောင်းကာ တီဗွီကြည့်နေရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ဖြန့်ကာ သေချာ ကြည့်မိတယ်။ လက်ဖဝါးက အရေးအကြောင်း လက္ခဏာတွေ ပြတ်သား ထင်ရှားစွာ မြင်နေရတော့ အံသြနေ မိတယ်။ အရင်ကဆို လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်စလုံး အရေးအကြောင်း တွေက များလိုက်တာ။ ကျွန်းခံနေတာ မဟုတ်ပါ၊ မကြည့်ချင်အောင် ခြုံတွေထူထပ် နေတယ်တောင် ထင်ခဲ့ရတယ်။ အခုမှ တော်တော် ထူးဆန်းနေတယ်။
အဲဒီအကြောင်း အတူနေ အကိုကြီး တစ်ယောက်ကို ပြောပြမိတယ်။ သာမန်ပါပဲ -“ကျွန်တော်လက်က လက္ခဏာတွေ အရင်နဲ့မတူဘူး ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လာရတယ်” လို့ ပြောရင်း သူကလဲ စိတ်ဝင်းစားသွားတယ်ထင်တယ်။ “ပြစမ်းပါဦးကွ” ဆိုပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို သေချာ ယှဉ်ကြည့်တယ်။ သူက ပြောသေးတယ် “အကိုက အရမ်းနားလည် လို့တော့ မဟုတ်ဘူး ကိုင်ရိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးတည်းက လက္ခဏာကို စိတ်ဝင်းစားလို့ လေ့လာခဲ့တယ်၊ နည်းနည်း ပြောကြည့်မယ်” တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ လုပ်စမ်းပါဦးပေါ့ သိချင်စိတ်နဲ့ ဆက်မေးမိတယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နှလုံးသားရေး နဲ့ အောင်မြင်ရေး အကြောင်းတွေ သူပြောပြတယ်။
ထူးထူးခြားခြား ကျွန်တော့ကို သူပြောပြတာ တခုရှိတယ်။ “ညီက မွေးရပ်မြေကို လုံးဝစွန့်ခွာ ရမယ့် လူတစ်ယောက်ပဲ” တဲ့။ သေချာ၇ဲ့လားဗျာ ဆိုတော့ သေချာတယ် ညီ့ရဲ့ လက္ခဏာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပါနေတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာ စပြီး ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ဝင်လာတော့တာပဲ။ တကယ်ဆို မွေးရပ်မြေကို လွမ်းလို့ကောင်းနေဆဲ အချိန်ပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ခေတ္တ ခဏ အလုပ်လာလုပ်တယ်။ ပြီးရင် အဖေ အမေရှိတဲ့ မွေးရပ်မြေကို ပြန်မှာပေါ့။ ခဏတာခွဲခွာ နေရတာတောင် လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်း ရာသီစာတွေလွမ်းလိုက်ရတာ။ အခုလို မွေးရပ် မြေကို လုံးဝစွန့်ခွာရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် .. အပြင်မှာလဲ မိုးတွေအုံနေဆဲ.. သက်ပြင်းတွေ အခါခါချလို့ ခုတင်ပေါ် ပြန်လှဲကာ အတွေးများ နယ်ချဲ့ နေမိတယ်။ ကျောက်ပန်း တောင်းမြို့ ဆိုတာ နယ်နယ်ရရမြို့မှ မဟုတ်ဘဲ။ ရာဇာဝင်နဲ့ သမိုင်းနဲ့။ အချစ်ကြီးတဲ့ ရိုးသားတဲ့ လူတွေ ရှိတဲ့မြို့.......။
ငယ်ငယ်က။ အဖေ မြို့ကို ပဲတွေ နှမ်းတွေ သွားရောင်းတဲ့အခါ တအား လိုက်ချင်ခဲ့တယ်။ မြို့ကို မလိုက်ရတဲ့ အခါများဆို ငိုရတာ အမော။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ပေါ်မှာ လူတွေအများကြီးနဲ့ ကားတွေမျိုးစုံ၊ မြင်းလှည်းတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ စက်ဘီးတွေ ကြားမှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ငေးရတာ ပျော်စရာကြီး။ ဆယ်တန်းနှစ်ရောက်တော့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ပေါ်က ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ဆရာမ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး (မြို့ရှေ့ကျောင်း ဆရာမ) အိမ်မှာနေလို့ ကျောင်းတက်။ အထက (၁) ဆိုတာ ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းကြီးပေါ့။ ကျောင်းရှေ့ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ နိုင်ငံတော် အလံ အလေးပြုဖို့ တန်းဆီကြတော့ ရင်တွေတုန်နေမိသေး။ အစိမ်း အဖြူ တူညီ ကျောင်းဝတ်စုံ တွေနဲ့ မူလတန်းမှ အထက်တန်းထိ ကျောင်းသူ/သား တွေနဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း သံပြိုင်ဆိုတော့ ပဲ့တင်ထပ်လာတဲ့ အသံက ကျောထဲစိမ့်အောင်ပင် ကျက်သီးထမိပါရဲ့။
ပထဝီမှာ သင်ရတယ် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ရေမြေတောတောင် သဘာဝအကြောင်းတွေ၊ ရာသီဥတုအကြောင်းတွေကို။ အမြင့်ပေပေါင်း ၄၉၈၁ ပေမြင့်တဲ့ ပုပ္ပားတောင်ဟာ ကိုယ့်မြို့ အနားမှာ ရှိတော့ ခဏခဏ ရောက်ဖူးတယ်။ ဟိုတလောက သတင်းတွေထဲမှာ ပုပ္ပားတောင်ကလပ်က မြောက် တွေထက် မြောက်စာရောင်းတဲ့လူတွေက ပိုကြောက်ရတယ်လို့ ဖတ်ရသေးတယ်။ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ယခုဆို ပုပ္ပားမှာ ငှက်ပျောသီးတွေ ဘယ်ဈေးရှိမလဲ။ ဆေးပင်ဆေးမြစ်တွေရော ရှိရင်း စာရင်း တွေထဲက ခုန်းဆင်းသွားလေမလား။ အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီ ဒီဇင်ဘာ အားကစားလမှာ ပုပ္ပားတောင် တက်ပွဲ ကျင်းပတာ မှတ်မိတယ်။ စောစောအိပ်လို့ စောစောထိလို့ မြူနှင်းများကြားမှာ လမ်းလျှောက် ချင်သေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ချင်မူးတူးနဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ စာကျက်သံတွေ ကြားနေရ လိမ့်မယ်။ မကြာခင်မှာ ဆောင်းဝင်တော့မယ်။
မှတ်ချက် = ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကျွန်တော့်မေး အဟတ်ခံရပါတယ်။ ဂူဂဲကို ရီကွက် လုပ်လို့ အခုပြန်ရပါပီ။ ထူးခြားမှုတော့ မရှိဘူး။
DatE Wednesday, September 08, 20100comments link this
သဘောင်္ကျင်းမှာ ဂျပန်ပိုင်တဲ့ သဘောင်္တစ်စီးကို ပြင်နေပါတယ်။
အီလက်ထရီကယ် ပြင်တဲ့သူ .. မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်.
မစ်ရှင်နရီဆိုဒ်က ပြင်တဲ့သူ .. မြန်မာလိုမျိုးဖြစ်တယ်.
စတီး စထရက်ချာ ပြင်တဲ့သူ .. မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်.
စတေ့ဂျင် ညဏ်ဆင်တဲ့သူ .. မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြန်တယ်.
ထမင်းချက်တဲ့ချက်ကြီက - မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေရော..
အင်ဂျင်နီယာ စက် ၁ ၊ စက်၂ ၊ စက်၃ ... မြန်မာလူမျိုးတွေပဲ.
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဓာတ်ကြိုးလဲ .. မြန်မာပဲဗျာ..
အားလုံး မြန်မာတွေချည်းပဲ ဘာလို့ သူများနိုင်ငံမှာ လာလုပ်နေရတာလဲ.. အဲဒါဘဇာကြောင့်လဲ.. :P
DatE Saturday, August 28, 2010 LaveL ဘာကြောင့်လဲ0comments link this
DatE Wednesday, August 18, 2010 LaveL မတည်မြဲခြင်း0comments link this
မြတ်စွာဘုရားရှင်က ရဟန်းတော်များကို "ချစ်သားတို့ ဒါနရဲ့ အကျိုးကို ငါဘုရား သိသလိုသာ လူတွေ သိကြမယ်ဆိုရင် စားမယ့်ဆဲဆဲ ထမင်းလုပ်ကိုတောင်မှ စွန့်ပြီးလှူကြလိမ့်မည်" ဟုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားတွင် အများအကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေသူများရှိပါသည်။ အချိန်ပိုင်း ဆောင်ရွက်နေသူများရှိသလို အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်နေသူများလည်း ရှိပါသည်။
ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်တတ်မှု့သည် လူ့အရည်သွေးတစ်ခုဖြစ်ရာ ဤသို့သော သူများကြောင့်လည်း ကမ္ဘာလောကကြီးပိုမိုလှပ သာယာနေခြင်းဖြစ်၏။
အဝေးရောက် ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်းသည် စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့မဟုတ်စေကာမူ ညီညွတ်၏၊ စည်းလုံး၏၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေးစား၏၊ ချစ်ခင်ကြင်နာ၏၊ အနစ်နာခံတတ်ကြ၏။ ထိုစိတ်ထား များသည် ကျွန်တော်တို့ ကျောက်ပန်းတောင်းသူ/သား များ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးသော အဖိုးတန်ဆုံးသော စိတ်ဓါတ်များလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကယ်တင်ရှင်များမဟုတ်ပါ။ အခြေအနေပေးသမျှနှင့် မြန်မာပြည်တွင် မပြည့်စုံရှာသော သားချင်းများကို ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်စွမ်းပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေကို ပြောပြတဲ့အခါ တစ်ချို့က ဆင်းရဲတာ တစ်နိုင်ငံလုံးနည်းပါး ဖြစ်နေတယ် ဘယ်ဖြစ် နိုင်မလဲဆိုသော အပြုသဘော မဆောင်သည့် ဝေဖန်စကားများပြောလာကြပါသည်။
ဆရာဖေမြင့်ဘာသာပြန်ထားသော နှလုံးသားအဟာရ ရသစာများထဲကလို တခြားသူတွေအတွက် မထူးချင်နေရမည် ကျွန်တော်တို့လှူလိုက်သော နေရာအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ထူးသွားမည့်သာဖြစ်ပါသည်။
ယ္ခုဆိုလျှင် လိုအပ်နေသည့် နေရာများထဲမှ ၁လ(သို့)၂လ တစ်ခါလောက်တော့ တစ်နေရာရာတွင် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ စည်းလုံးခြင်းအင်းအားများ၊ သဒ္ဓါတရားအင်းအားများကြောင့်အကျိုး ထူးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် အဘယ်မျှ ကြည်နူးသာဓု ခေါ်ဘို့ကောင်းလိုက်ပါသနည်း။ စဉ်းစားကြည့်ယုံဖြင့် ပီတိများစွာဖြစ်ရပါသည်။
ယ္ခုလိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိခံစားသွားမည့်သူများသည် ကျွန်တော်တို့၏ သွေးသားချင်းများ မြန်မာပြည်သူ/ သားများဖြစ်ကြပါသည်။ (မြန်မာဆိုသည်မှာ မြန်မာပြည်ရှိ လူမျိုးအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု ခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ကျွန်တော်တို့၏ ဘာမှမပြောပလောက်သော ဆောင်ရွက်ချက်ကလေးများသည် လိုအပ်နေသည့် နေရာများ အတွက်တော့ အင်မတန်မှ အဖိုးထိုက်တန်သော အရာများပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူတို့အဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသောအရာများသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ပြောပလောက်သော
လူတိုင်းလူတိုင်းသည် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးနေကြသည်ဖြစ်ရာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သော မိမိတို့ ဘ၀တွင် ငါအများအကျိုးအတွက်၊ ပရဟိတ အတွက် မည်မျှလုပ်ဆောင် ခဲ့ဖူးသလဲ၊ ကိုယ်ကျိုးမသယ် အမြတ်အစွန်း မထွက်မဲ့ ပရဟိတ ကိုစေတနာပါပါဖြင့် ဘယ်လောက်များ စွမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသလဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုမေးမြန်းခဲ့ ဘူးပါသလား?။ ဟိုးငယ်စဉ်ဘ၀ ကကျောင်းက ဆရာ/မ များက သင်းပေးသော "ကောင်းမှု့တစ်ခု နေ့စဉ်ပြု" ဆိုတာတွေဘယ်မှာ ကျပျောက်ခဲ့ကြပြီလဲ။
ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ ကိုယ်ကျိုးမဖက်၊ အများအကျိုးကိုသာဆောင်ရွက်နေသူတွေများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သူတို့လောက် မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါ။ ကိုယ့်အကျိုးမဖက် များအကျိုးကို မလုပ်ဆောင်နိုင် သည့်တိုင် ကိုယ့်အကျိုးစီးပွါးကို လုပ်နေရင်း အချိန်အနည်းငယ်လောက်၊ ငွေကြေးအနည်းငယ်လောက်နှင့် လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဝေးရောက် ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်းသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ မည်သူမဆို အသင်းဝင်နိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်မဟုတ်လျှင်လည်း လှူဒါန်းလိုသူတိုင်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ အလှူငွေရရှိမှု့ အပေါ် မူတည်၍ ၁လ (၁) ကြိမ် (သို့) ၂လ (၁) ကြိမ် အလိုအပ်ဆုံးနေရာ သို့ လှူဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အလှူငွေရရှိမှု့မှာလည်း အရေးကြီးလှပါသည်။ ယ္ခု စင်္ကာပူတွင်ပင် ကျောက်ပန်းတောင်းသူ/သားများ ခန့်မှန်းခြေအယောက် (၇၀) ခန့်ရှိပါသည်။ နာမည် အတိအကျ နှင့် သိရှိရသူပင် အယောက် (၅၀) ၀န်းကျင် တွင် ရှိပါသည်။
တစ်ယောက်ဆီမှ အလှူငွေ တစ်လ (၁၀) သာ လှူနိုင်လျှင်ပင် တစ်လ လျှင် အနည်းဆုံး S$(700) ခန့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်လလျှင် $(10) ထက်ပို လှူမည့်သူများလည်းများစွာရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိ ကိုယ်စီ အတွက် မပြောပလောက်သော ပမာဏလေးများ အမြောက်အများ စုပေးနိုင်လျှင် တစ်ကယ် လိုအပ်နေသော ကိုယ့်မွေးရပ်မြေမှ သွေးချင်းများအတွက် လိုအပ်နေသော ကွပ်လပ်လေးများအား ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ယ္ခုလက်ရှိတွင် ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်းသား ဦးရေ (၃၅) ဦးရှိပါသည်။ အသင်းဝင် မဖြစ်သေးသော သူများသည် အသင်းအား မသိသေးသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများအား လည်း အသင်းတည်ရှိနေခြင်းအား သိရှိစေရန်နှင့် အသင်းဝင် ဖြစ်လိုသူများ အသင်ဝင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစာအား ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအား forward ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အသိပေးပြောကြားခြင်းများဖြင့် အသင်းအား ကူညီပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အသင်း ရေရည်တည်တံ့ရေးအတွက် အသင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေသော နေရာများတွင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမည့် အသင်းသူ/သားများလည်း အမှန်တစ်ကယ် လိုအပ်နေပါ သေးသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသင်းအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်လိုသူများလည်း ဆက်သွယ် ၍ မိမိ တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင် ကူညီအားဖြည့်ပေးကြရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
နှမ်းတစ်စေ့ နှင့် ဆီမဖြစ်သော်ငြားလည်း နှမ်းအစေ့ပေါင်း များစွာ စုစည်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်တိုင်း အောင်မြင်စွာ လှူဒါန်းနိုင်ရန် မိမိ တို့တတ်နိုင်သည့်
ဘက်မှ မိမိတို့တတ်နိုင်သည့် ပမာဏလေးများ ပါဝင် ကူညီကြစေလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောက်ပန်းတောင်း အသင်းသည် ကိုယ့်မွေးရပ်မြေ ဖြစ်သော ကျောက်ပန်းတောင်း ဒေသ အတွက် လုပ်ဆောင် နေခြင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ် စွဲ အားဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိအခြေနေအရ မိမိတို့တတ်နိုင်သည့် နိုင်ရာဝန် ထမ်းနေခြင်း သာဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တစ်ကယ် လိုအပ်နေသော မြန်မာပြည်တွင်းရှိ နေရာဒေသ တိုင်းအားလှူဒါန်းချင် ကြပါသည်။ အသင်း၏ တိုးတတ်အောင်မြင် လာမှု့အပေါ်မူတည်၍ အခြားသော မြည်မာပြည် နေရာအနှံ့တွင်လည်း လှူဒါန်းသွားရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါကြောင်း အသိပေးပြောကြားအပ်ပါသည်။
အလှူငွေစာရင်းအား လစဉ် ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖေါ်ပြပါမည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များ အနေဖြင့် လစဉ် ၁၅ ရက်နေ့ အမှီ အလှူငွေထည့်ဝင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အသင်းဆိုဒ်လိပ်စာ မှာ www.kyaukpadaung.com ဖြစ်ပါသည်။ အကြံပေးချက်များအား kpg.kyaukpadaung@gmail.com သို့ပေးပို့ အကြံပေးနိုင်ပါသည်။
DatE Monday, August 02, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
တကယ်ဗျာ.. မနေ့ညနေက အမေ့ကို တော်တော်လေး သတိရနေမိတယ်။
အလုပ်က ပင်ပန်းလာလို့ အိပ်ရောက် ခဏနား ပြီး ညစာ၊ နောက်နေ့စာ အတွက်ချက်ရတယ်။ ထမင်းဟင်း ချက်နေရင်းနဲ့ အမေ့ကို သတိရနေမိတယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲ ချက်ရတာတောင် တခါတခါ သဘောက မကျချင်ဘူး။ ချက်ပြီး ဝဲပြစ်လိုက်ရတာ တခါခါရယ်။
အမေက လူတွေအများကြီးစာချက်ရတာ။ မိသားစုဝင် များတယ်။ အမဲသားမစားဘူး။ ဝက်သားမစားဘူး။ ငရုပ်သီး အစပ်ကြောက်တယ်။ စပ်စပ်လေးမှ။ အလုပ်ကိုများနေရော။ အမေ စိတ်ပျက်လို့ ငြီးသံ တခါမှ ကျွန်တော် မကြားခဲ့ရဖူးဘူး။ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးတယ် ချော့မော့ကြွေးတယ်။ မိဘများ စေတနာထား ဒုက္ခခံတာကို ပြန်အောင်းမေ့ပြီး အမေ့ကို သတိရနေတာ တအား။
ဝမ်းကွဲ ညီငယ်တစ်ယောက် ပေါ့..... ဝတုတ်တုတ် ပေါတောတော နဲ့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် .. သူ့ အမေကို အော်ပြောတယ်.. “““အမေ... ထမင်းစားမယ်. ထမင်းခူးပေး ....... ””” သူ့ အမေက “ထမင်းမကျက် သေးဘူး ကွဲ့ သားရဲ့.....” ပြန်ဖြေတယ်။ ဒါကိုပဲ... သူက “““ဟာဗျာ... မကျက်.ကျက်ကျက် ခူးပေးဗျာ.. ဗိုက်ဆာလှပြီ... ””” တဲ့လေ...။ ငယ်သေးတော့လဲ ဘာမှ မသိရှာသေးဘူးပေါ့။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်.. ငယ်ငယ်က အဲလိုတော့လဲ ဆိုးခဲ့ပါဘူး။ အမေ အလုပ်များတာလဲ သိတယ်။ မအားလပ် တဲ့ကြားက သားကြီး သားငယ် အဆင်ပြေအောင် ချော့ရ၊ ထိန်းရ တာလဲ သိတယ်။ ထမင်းစားရင် နောက်ဆုံးမှ စားတတ်တာလဲသိတယ်။ အမေကလဲ အတူစားမယ်လေ. ဆိုတော့မှ စားတယ်။ ထမင်းစားပြန်တော့ အမေ့ ထမင်းပန်းကန်ထဲ အသားတုံးတွေ ထည့်ပေးတော့ .. သွားကြားညပ်မှာ ဆိုးလို့တဲ့။ သားပဲစားပါတဲ့။ ပြန်တွေးမိရင် အမေ့ကို ပိုလို့ လွမ်းမိ သတိရမိတယ်။
အဲလိုနဲ့ အမေ့အကြောင်း စဉ်းစားရင် ချက်ပြုတ်ပြီးလို့ နားမယ်ကြံတော့ အဝတ်တွေက မလှန်းရသေးဘူး။
ဟာာား ...ဘဝ.. မလွယ်ပါလားနော်.. ။
DatE Sunday, July 25, 20100comments link this
တော်တော် တုန်းတဲ့ ငါ ။
ငါ့အတွက် တော်တော် ခက်တယ်။
ငါ့ရဲ့နားလည်မှုတွေ လောကနဲ့ အံမဝင်ဘူး။
တကယ်တော့ ငါဟာ ဘာမှမသိ နားမလည်တဲ့ စောက်ရူး။
တခါတလေ ကမ္ဘာကြီးက ပြားနေတာပဲကောင်းပါတယ်။
DatE Thursday, July 22, 2010 LaveL ရေးချင်တာရေးသည်0comments link this
အဝေးရောက် ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း www.kyaukpadaung.com
၁။ စုပေါင်းအားဖြင့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘာသာရေး၊ လူမှု့ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး တို့တွင် တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ရန်။
၂။ ကျောက်ပန်းတောင်း သူ/ သားများ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မသိသူမရှိစေရန် (တစ်ဦးအခက်အခဲ တစ်ဦး ကူညီ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်)။
၃။ ကျောက်ပန်းတောင်းသူ/သားတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းစိတ်ဓါတ်ကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းရန်နှင့် အနာဂါတ်လူငယ်များ အတုယူနိုင်ရန်။
အထက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားသော kyaukpadaung.com လာလည်ကြဖို့ ဘလော်ဂါ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပန်သတင်းလေညှင်းဆောင် လူသတင်း လူချင်းဆောင် ဆိုသကဲ့သို့ တဆင့်စကားဆိုလို့ သတင်းကောင်း ပါးပေး ကြပါလို့ အသင်းကိုယ်စား ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
DatE Wednesday, July 21, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀လောက်က မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးမှာ ထန်းပင်ပေါင်း နှစ်သန်းသုံးသိန်းကျော် ရှိတယ်လို့ စာရင်းများအရ သိရပါတယ်။ အခုချိန်မှာ တော့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း ထန်းပင် ပေါင်း သုံးသိန်းကျော်နဲ့ တောင်သာ၊ မြင်းခြံနယ်ဘက် မှာလဲ သိန်းနဲ့ချီပြီး ထန်ပင်များရှိနေပါတယ်။ ကျောက်ပန်း တောင်းမြို့ကနေ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာကို သဲလမ်း အတိုင်းသွားရင် ထန်းပင်ထန်းတော တွေကြားကနေ ဖြတ်သွားရတာ ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။
သင်္ဘောသီးပင်၊ ကျွန်းပင်တွေလိုပဲ ထန်းပင် မှာလဲ အဖိုပင်နဲ့ အမပင်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ အဖိုပင်ရဲ့ ထန်းနို့ကို လှီးရင် ထန်းရည်ချို ထွက်ပါတယ်။ ထန်းမပင် က အသီးသီးပါတယ်။ ထန်းမပင်ရဲ့ထန်းသီးခိုင်ကို ညှပ် နဲ့ညှပ်ပြီး ထန်းရည်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထန်းပင်တစ် ပင်ဖြစ်ဖို့ ထန်းသီးစေ့ကို စိုက်ပျိုးရပြီး တစ်နှစ်ခန့်အ ကြာမှာ အပင်ပေါက်ကလေးဟာ မြေပေါ်ကို ထွက် လာပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို တစ်ပေခန့်မြင့်တက်ပြီး သက် တမ်းဟာ နှစ် ၁၀၀ခန့်အထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ထန်းပင်တွေ ဟာ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ အညာဒေသမှာ အများအပြား ပေါက်ရောက်ပြီး အောက်ဘက်ဒေသ ရန်ကုန် တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတွေမှာလဲ ပေါက် ရောက်ပါတယ်။
ထန်းပင်ဟာ အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အပင် မျိုးပါ။ နာဂစ်လို လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ဒဏ်ကို တောင် မပြိုမလဲဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့ ပင်မျိုးပါ။ ထန်းပင် ဟာ ပေပင်၊ အုန်းပင်၊ ကွမ်းသီးပင်၊ စွန်ပလွံပင်တို့နဲ့ ရုက္ခဗေဒ မျိုးရင်းတူပါတယ်။ ထန်းရွက်နဲ့ ပေရွက်ဟာ လက်ဝါးပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး အုန်းပင်၊ ကွမ်းသီးပင်၊ စွန် ပလွံပင်အရွက်များဟာ ငှက်မွေးပုံသဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်တဲ့အခါ သစ်သားမထွက်ဘဲ ဖိုင်ဘာမျှင်တွေသာ ရှိပါတယ်။ ထန်းပင်မှ ထန်းရည်ချိုသာထွက်ပါတယ်။ ထန်းရည်ခါးအတွက် အချဉ်ပေါက်နေတဲ့ အလျင်အိုး နဲ့ခံမှသာ ထန်းရည်ခါးရရှိပါတယ်။
ထန်းရည်ချိုဟာ အစာကြေညက်စေတဲ့အတွက် ဆရာတော်ကြီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများက ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ သောက် သုံးကြပါတယ်။ ထန်းရည်ခါးကတော့ ဆီးရွှင်စေပါ တယ်လို့ ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင်ရဲ့ ရသဓာတုကျမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထန်းပင်တစ်ပင်လုံးဟာ လူသား များအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ ထန်းပင်မြစ်ကို မီး ဖုတ်လို့ဖြစ်စေ၊ ပြုတ်လို့ဖြစ်စေ နှစ်ခြိုက်စွာ သုံးဆောင် နိုင်ပါတယ်။ ထန်းသီးဆန်နုနုကိုလဲ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့ ကျောက်ကျောစားရသလိုပါ ပဲ။ ထန်းသီးရင့်မှည့်တဲ့အခါ ဖိုက်ဘာအမျှင်တွေကြား က ၀ါဝါအနှစ်ချိုချိုမွှေးမွှေးကို ဆန်မှုန့် နှစ်ရည်သကြား တို့နဲ့နယ်ပြီး ပေါင်းခံပြီး အုန်းသီးဖတ်ဖြူးပြီး ထန်းသီး မုန့်အဖြစ် စားနိုင်တယ်။
ထန်းရွက်ကို ဇာတာဖွဲ့ဖို့ ပြု လုပ်တယ်။ ထန်းဖူးကို ငါး၊ ငှက်ရုပ်ပြုလုပ်ပြီး ဘုရားပွဲ တော်တွေမှာ ရောင်းကြတယ်။
ထန်းဖူးကို ဘူးလေး တွေရက်ပြီး ထန်းလျက်ခဲ၊ မန်ကျည်းတော်ဖီ၊ ဆီးတော် ဖီထည့်ပြီးအမှတ်တရရောင်းတယ်။
ထန်းလက်ကို ကုလားထိုင်လုပ်တယ်။ ထန်းရွက်ကို အိမ်မိုးတယ်၊ ကာ တယ်။ ထန်းပင်စည်ကို အိမ်တိုင်၊ ထုတ်တန်း၊ ရက်မ၊ ကြမ်းခင်းအဖြစ် အိမ်ဆောက်ရာမှာ သုံးကြတယ်။ ထက် ခြမ်းခွဲပြီး ရေတံလျှောက်၊ နွား စားခွက်လဲ လုပ်နိုင်သေးတယ်။
ထန်းပင် ပင်စည်အောက်ပိုင်းကို နိုင်ငံခြား ပို့ကုန်အဖြစ် တင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။ ထန်းပင်ကို ခုတ်လှဲပြီး နှစ်ရက်အတွင်း အချောသပ်ရွေပေါ်ထိုးပြီး ပေါ်လစ်အရောင်တင်ဆီသုတ်လိုက်ရင် အင်မတန်လှ ပါတယ်။ အမြင့် ခြောက်ပေ၊ ခုနစ်ပေလောက်အမြင့်ရဲ့ ထိပ်ဝကို အလယ်မှထွင်းပြီး ပန်းအိုးအဖြစ် ဟိုတယ်ကြီး တွေမှာ၊ အိမ်ခြံဝင်းမြက်ခင်းပြင်တွေမှာ အလှပန်းအိုး အဖြစ် တခမ်းတနားအသုံးပြုကြပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ နဲ့ ရန်ကုန်က ကုန်သည်တွေ နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့နေပါ တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကမ်း နားလမ်းက Strand Hotel က အမှတ်တရ လက် ဆောင်ပစ္စည်းပြခန်းမှာ ရောင်းနေပါတယ်။
ဟို-တစ်ခါတုန်း ဆီက အာရပ်နိုင်ငံတွေရဲ့ သဲကန္တာရထဲမှာ ခရီးသွား ကုန်သည်တွေဟာ ကုလားအုတ်စီး၍ တစ်နေကုန် ခရီး သွားခဲ့ရပြီး ညနေစောင်းမှ အိုအေစစ်လို့ ခေါ်တဲ့ စွန် ပလွံပင်တွေနဲ့ရေအိုင်ရှိတဲ့နေရာကို ရောက်တာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ ရေနံတွေ အကြီးအကျယ်ထုတ် လုပ်ရောင်းချနိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေဘီလီယံ၊ ထရီလီ ယံပေါင်းများစွာ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတော့ နည်းပညာ အတတ်ပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ဆာဟာရ သဲကန္တာရ ကို မြေတူးစက်ဘူဒိုဇာတွေနဲ့ တူး၊ အောက်ခြေကြမ်း ပြင်ကို ရေစိမ့်မထွက်အောင် ကတ္တရာတွေခင်းပြီး မြေ ပြန်ဖို့၊ ကျင်းတူးထားတဲ့နေရာမှာ အရွယ်ရောက်ပြီး သား စွန်ပလွံပင်တွေကို ထရပ်ကားနဲ့ သယ်လာပြီး ရေလောင်းစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အခါ မိုင်ပေါင်းများစွာ ရှည်လျားတဲ့ စွန်ပလွံပင်တောကြီးဟာ သဲကန္တာရထဲမှာ ပေါ် ထွန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဂေဟ ဗေဒ (Ecology) တစ်စတစ်စပျက်ယွင်းလာတဲ့ အခြေ အနေတွေကြောင့် ထန်းတောတွေကိုလဲ
ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ သဘာဝသစ်တော တွေဟာ ရာသီဥတုအတွက် အင်မတန် အရေးပါတာ ကို လူသားတွေ သိလာနေပါပြီ။ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်စေဖို့ ဂျပန် နိုင်ငံနဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကအကူအညီ တွေပေးလျက် ရှိနေပါတယ်။ Forest Resource Environment Development and Conservation Association(FREDA) အဖွဲ့အစည်းကလဲ အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
အောင်ကျည်စိုးမြင့် ရေးသားသော “မြို့ပြကျေးလက်နဲ့ မိုးမျှော်ဟိုတယ်ထန်းတော” မှ ထုတ်နှုတ်ယူသည်။
စဉ်းစားမိခြင်း။ ။ အညာဒေသက ယောင်္ကျားသားများ မလေးရှား၊ ကာတာ၊ ဒူဘိုင်း၊ စင်္ကာပူစသော ပြည်ပနိုင်ငံ များသို့ အလုပ်လုပ် ထွက်ကြတဲ့အခါ ထန်းတက်သူဦးရေ နည်းပါးလာတယ်။ ကျေးလက်တွင် အသုံးပြုရန် ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး စသော သစ်များ ရှားပါးချိန်တွင် အိမ်၊ နွးတင်းကုတ် များစောက်ရန် ထန်းကို မျက်စိကျနေပါတယ်။ ခေတ်ကာလအရ ထန်းထွက်ကုန် ဈေးနှုန်း မ၇တာကြောင့် ရှေးယခင်ကလို ထန်းတောကို မွေးမြူကာ ထန်းလုပ်ငန်း လုပ်ခြင်း နည်းသွားတာလဲ အမှန်ပါ။ ဆိုတော့.. အဘိုးတို့ခေတ်က ဒီနှစ်တော့ ထန်း ၁၀၀ စိုက်မယ် ဆိုပြီး မိုးကျတာနဲ့ ယာကန်သင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် လိုချင်တဲ့နေရာမှာ စိုက်ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အဲလို စိုက်တာ မရှိတော့ပါဘူး။ လူဦးရေ တိုးလာခြင်းသာရှိပြီး ရှိလက်စ ထန်းတောများလဲ ယာမြေ အဖြစ် ပြောင်းသွား တတ်ကြပါတယ်။ ထပ်မံစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိပဲ အလေ့ကျ ပေါက်လောက်သာရှိနေတော့ ကြာလာရင် မလွယ်ပါဘူး။
ဆိုတော့ကား...ထန်းပင် ထန်းတောများ ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ .. ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာခြင်း စသော ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ ဟောပြောပွဲများ ကျေးလက်ဒေသထိ ဆင်းကာ ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
DatE Tuesday, July 20, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
မနှစ်က ဒီနေ့အတွက် ပိုစ် တယ်ဖူးတယ် ဒီမှာပေါ့။
ဘာလို့ သမိုင်းဝင်နေ့ ဖြစ်ရတာလဲ သိချင် ဒီမှာဖတ်ပါ။
ယနေ့ နေမင်းသည် နွမ်းလျှနေ၏။ ယနေ့ လေပြေညှင်းသည်လဲ နွမ်းလျှနေ၏။ မိုးရွာရန် တိမ်မရှိပါ။
DatE Monday, July 19, 2010 LaveL အာဇာနည်နေ့0comments link this
အင်တာနက်တွင် လွှင့်တင်ထားသော ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အဖော်အချွတ် ၀က်ဘ်ဆိုက်အားလုံးအတွက် သီးသန့် Domain သတ်မှတ်ပေးတော့မည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက အတည်ပြုလိုက်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် .com၊ .co.uk စသည့် Domainများ ယူထားသော အဆိုပါ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို .xxxအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ် ပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံက ယင်းအမျိုးအစား ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း (၁၁၀၀၀၀) ကျော်၏ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Domain များကို (၂၀၁၁)ခုနှစ်တွင် စတင်ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး .xxx အဖြစ်သာ ခွင့်ပြုတော့မည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ဝေဖန်သူများက ယင်းလုပ်ရပ်သည် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ၏ ရပ်တည်မှု လွတ်လပ်ခွင့်အား ထိပါးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ကလေးငယ်များအနေနှင့်လည်း ယင်းကဲ့သို့ ညစ်ညမ်း ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ရွေးချယ်ရန် လွယ်ကူသွားစေနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဗြိတိန်ရှိ အင်တာနက် လုံခြုံမှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Medaiwatch မှ ဗီယန်နာ ပက်တီဆန်က ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက် အတော်များများသို့ ၀င်လိုက်သည့်အခါတိုင်း အသက်(၁၈)နှစ်အထက် ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုခိုင်းသည့် Button ပါရှိခြင်းကြောင့် ယင်းက ကလေးများဝင် မကြည့်ရန် တားဆီးရေးအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် လုပ်ဆောင် ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။ .xxxဖြင့် Domainအမည်များ သတ်မှတ် ပေးမှုကို အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်Domainများ တရားဝင် အမည်သတ်မှတ်ပေးသော အဖွဲ့ကြီး ICANNက ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ လေ့လာသူများက အင်တာနက် Domainအမည် ရောင်းချသော ကုမ္ပဏီများ သည် ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း (၅၀၀၀၀၀)ကျော်အတွက် ပေါင်စတာလင် သန်း(၂၀)မျှ ရရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားသည်။ စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းတွင် လွှင့်တင်ထားသည့် ယင်းကဲ့သို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မျိုး သန်း(၃၇၀)ကျော်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မူရင်းသတင်း ပလန်းနက် ဒေါ့ကွန်း။
DatE Wednesday, July 14, 2010 LaveL ထူးခြားသတင်း0comments link this
ပုပ္ပါးတောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း၊ ပဲခူးရိုးမ၏ မြောက်ဘက်အစွန်းတွင် သီးခြား ထိုးထွက်နေသော မီးတောင်ဟောင်းကြီး တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ မြောက် လတ္တီတွဒ် ၂၀ ဒီဂရီ ၅၂မိနစ် ၊အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅ ဒီဂရီ ၁၄မိနစ် တွင်တည်ရှိသည်။
ပုပ္ပါးတောင်တွင် အလယ်က ချိုင့်ပဲ့ဖြစ်နေသော တောင်မကြီးအပြင် အနောက်ဖက်သို့ ဆင်ခြေလျှော နိမ့်ဆင်း သွားရာ အပိုင်း၌ ပုပ္ပါး တောင်ကလပ် လည်းပူးတွဲပါရှိနေသည်။ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်မှာ ပုပ္ပါးတောင်မကြီး ပေါက်ကွဲရာမှ ပဲ့ကျလာသည့် အစိတ်အပိုင်းဟု ယူဆတတ်သော်လည်း မီးတောင်လည်တိုင်တစ်ခုဟု အဆိုရှိ သည်။ ပုပ္ပါးတောင်မကြီးသည် အမြင့်ပေ(၄၉၈၁) ရှိပြီး ဆယ့်ကိုးယုတ်ငါးထောင်ဟု လွယ်ကူအောင်မှတ်သား တတ်ကြသည်။ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်သည်(၂၄၁၇ ပေ)သာမြင့်မားသော်လည်း လွန်စွာမတ်စောက်ကာ ကလပ် ပုံဖြစ်သည်။ တောင်မကြီးတွင် ပုပ္ပါး (ရုပ်/သံ) ထပ်ဆင့်လွှင့်စခမ်းတည်ရှိပြီး တောင်တက်ခရီးလမ်း ခက်ခဲသည်။ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်တွင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ဘုရားပုထိုးများ၊ အဆောက်အဦးများ များစွာတည်ရှိပြီး ဘုရားဖူး သူများ အပမ်းဖြေလေ့လာရေးခရီးထွက်သူများ (တောင်ကလပ်အခြေအထိ ကားလမ်းပေါက်သဖြင့်) စည်ကားသိုက်မြိူက်စွာ သွားလာနိုင်ကြသည်။
ပထ၀ီဝင် အနေအထားမှာ -
ပုပ္ပါးတောင်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၄၉၈၁) ပေ မြင့်သည်။ ပုပ္ပါးတောင်၏ မီးတောင် ကတော့ဝ မှာ တောင်၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် အနောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ် ယွန်းလျက် နိမ့်၍ တောင်ဘက် ၊အနောက် ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တို့တွင် မြင့်မားသည်။ ပုပ္ပါးတောင်ကို အနောက်ဘက်မှ ကြည့်လျှင် တောင်ထွတ်နှစ်ခု မြင်ရ၍ မြောက်ဘက်မှ ကြည့်လျှင် တောင်ထွတ် တစ်ခုသာ မြင်ရသည်။ ပုပ္ပါးတောင်သည် တောင်ထွတ် တစ်ခု တည်းသာ ရှိသည် မဟုတ်ပဲ စပါးပုံတောင် ၊ ရေတွင်းတောင် ၊ မောင်းတောင် ၊ ငုတ်တိုတောင် ၊ လပို့တောင် ၊ မှန်တောင် ၊ ဆေးပွင့်တောင် ၊ စိန်တောင် ၊ မာလာတောင် ၊ ကင်ပွန်းတောင် စသည်ဖြင့် တောင်စွယ်များစွာ ရှိလေသည်။ ပုပ္ပါးတောင်မကြီး မီးတောင် ထိပ်ဝသည် တစ်မိုင်ခွဲခန့် ကျယ်၍ ပေ ၂၀၀၀ ၊ ၃၀၀၀ ခန့် နက်ရှိုင်း သည့် ချောက်ကမ်းပါးကြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းချောက်ကြီးကို ချုံမတွင်း ချောက်ဟု ခေါ်သည်။
ပေါ်ထွန်းလာပုံမှာ - ဘူမိဗေဒပညာရှင်တို့အဆိုအရ ပုပ္ပားတောင်သည် လွန်ခဲ့သောအနှစ် (၁၅) သန်း လောက်က ပေါ်ထွန်းလာကြောင်း သိရှိရပါသည် (Dr. Nyi Nyi, “Burma One Million Years Ago”, The Working People’s Daily, March 15, 1964 Sunday Supplement)။ မြန်မာရာဇဝင်ဆရာတို့ကလည်း ပုပ္ပားတောင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပုံကို ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ဗျာဒိတ်တော်နှင့်တွဲ၍ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။ ရာဇဝင် ဆရာကြီး ဦးကုလားက ဘုရားသခင် သည် ငါးဝါအရ၌ သုနာပရန္တနှင့် တမ္ပဒီပတို့သို့ ကြွတော်မူလာခဲ့ပြီး ဖိုဦးတောင်ထိပ်၌ ရပ်တော်မူ၍ သာသနာ (၁ဝ၁) ခုတွင် ပုပ္ပားတောင်မြေမှ စုန့်စုန့်ပေါ်မည်ဟု ဗျာဒိတ် ထားခဲ့ကြောင်း ကို ယင်း၏ မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးတွင် ဖော်ပြ ထားခဲ့သည် (ကုလား၊ မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး၊ ပ၊ ၁၉၆ဝ၊ ၁ဝ၉)။ ဘူမိပညာရှင်တို့အဆိုနှင့် နှစ်ပရိစ္ဆေဒ များစွာ ကွာခြားလှ သော်လည်း ပုပ္ပားပေါ်ပေါက်လာပုံ သဘောသဘာဝကား အသိခြင်း တူညီကြသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရှေးမြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းသားတို့ ပုပ္ပားတောင်ကို သမိုင်းမတင်မီ ပဝေသနီကာလကတည်းကပင် စိတ်ဝင်စားခဲ့ ကြကြောင်း ခန့်မှန်းရမိပေသည်။
ပုပ္ပားတောင်သည် ကျောက်ခေတ်ဦး အညာသားယဉ်ကျေးမှု (Anyathian Culture) ထွန်းကားခဲ့ရာ ချောက်၊ ရေနံချောင်းတို့နှင့် ရေမြေ တဆက်တစပ်တည်း ရှိသောကြောင့် ထိုအချိန်ကာလက တည်းကပင် ကျောက် ခေတ် လူသားတို့ နေထိုင်ရာအရပ် ဖြစ်နေ ကောင်းလောက်ပြီ ယုံကြည်ရပါသည်။ ကျောက်လက်နက်များလည်း ထိုနယ် အနှံ့မှ တွေ့ရှိရဖူးသောကြောင့် ဤအတွေး ဤအယူအဆ မှန်နိုင်ကောင်းမည် ထင်ပါသည်။ အမေရိကန်ပညာရှင် မိုးဗီးယပ်စ် (Movius) က ပုပ္ပားနယ်တွင် ကျောက်ခေတ်သစ်လူနေ ရှိနေကြောင်း ကိုကား အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ (Hellmut De Terra and Hallam movius, Jr. Research on Early Man in Burma, 1943,pp. 342,379-382) ကျွန်ုပ်တို့ခေတ် ပညာရှင်တို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ နိုင်သေးလျှင် ထို့ထက် တိကျကျယ်ပြန့်သော အဖြေထွက်ပေါ်လာ နိုင်စရာ ရှိပါသေးသည်။ ပုပ္ပားတောင် ဝန်းကျင်ဒေသသည် ရှေးက ယခုမျက်မှောက် အချိန်အခါထက် ရာသီဥတု ကောင်းနိုင်သကဲ့သို့ တောလိုက်၍ လူနေ၍ ကောင်းသောနေရာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရာဇ၀င်တွင် ခရစ်မပေါ်မီ အနှစ် ၄၄၃ က၊ ဧရာဝတီမြစ်ရိုး၏ အလယ်ပိုင်းလောက်တွင် အံ့သြဘွယ် အကြောင်း အခြင်း အရာ ငါးရပ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပေသည်။
အသံကြီးစွာ မြည်လျက် မြေငလျင်လှုတ်ခဲ့သည်။
ဖိုးဥမောင်အရပ်မှ ရေအိုင်ကြီးတစ်အိုင် ပေါ်လာသည်။
စမုံ၊ စမြိတ် မြစ်နှစ်စင်း စီးဆင်းလာသည်။
သရေခေတ္တရာ ၀န်းကျင်က ပင်လယ်သည် ခမ်းခြောက်သွားသည်။ (မှန်နန်းရာဇ၀င်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၊ ၁၉၂၃၊ စာ-၇) ထိုသို့ မြေအကြီးအကျယ် လှုတ်သွားတာ အရင်နှစ်ပေါင်း တစ်သန်းက ဖြစ်မည်ဟု ထင်ရသည်။ ရာဇ၀င်တွင် ခရစ်မပေါ်မီ အနှစ် ၄၄၃ က၊ တစ်ညတည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ (မှန်နန်းရာဇ၀င်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၊ ၁၉၂၃၊ စာ-၁၄) မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်းများတွင် ပုပ္ပားတောင်ကို ပုဂံခေတ်အပိုင်း၌ များစွာ အရေးထား ဖော်ပြပေးနေသည်မှာ ထိုဒေသသည် အလွန်ရှေးကျသော ကာလများကတည်းက စဉ်ဆက်မပြတ် လူနေရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ အရေးပါသော နေရာဌာန တခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါမည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ကျောက်ခေတ်ဦး သို့မဟုတ် ကျောက်ခေတ်နှောင်း ကာလ ယဉ်ကျေးမှု စတင်ထွန်းကားစပြုကတည်းက ထူခြားသောတောင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အားထားကိုးကွယ် လောက်သော (မြင့်မြတ်သော နတ်) တောင် အဖြစ် လည်းကောင်း စဉ်းစားခဲ့ကြမိမည်မှာ ယုံမှားသံသယ ကင်းပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ပုပ္ပားကို နတ်တို့ နေရာဟူ၍ လက်ခံယုံကြည်နေလောက်ပြီဟူ၍တည်း။ ဤယုံကြည်ချက် သည် မြန်မာတို့ တတ္ထဒေသ၌ အရိမဒ္ဒန ပူရ (ရန်မျိုးနှိမ်မြို့) မင်းနေပြည်တော်ကြီးကို တည်ထောင် နိုင်သောကာလထိ ဆင်းသက်ပါရှိ လာခဲ့ဟန် ရှိပါ သည်။ ရာဇဝင်ဆရာတို့အဆိုအရ ပုဂံမင်းတို့ ပုပ္ပားတောင်ကို တလေးတစားပြုနေကြသည်မှာ ပုပ္ပားတောင်၏ အစဉ်အလာ ကြီးခဲ့မှုကြောင့်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နတ်တောင်ဟူ၍ အထင်အရှားဖြစ်ရန် နတ်တပါးကို နေရာ ချထားပေးမှဖြစ်မည်ဟု သဘောပေါက် လာသော အခါ မဟာဂီရိ (တောင်ကြီး) ဟူသော ပါဠိဝေါဟာရဖြင့် ခေါ်ဆိုခဲ့သော ထီးထီးမားမား တခုတည်းသာရှိသည့် (ပုပ္ပား) တောင်ကြီး ကို နတ်နေအဖြစ် ပြောင်းလိုက်ခြင်း ဖြင့် လွယ်ကူစွာ ပြီးမြောက်သွားခဲ့လေတော့သည်။ သို့သော် တကောင်းမှ ပန်းပဲမောင်တင့်တယ် ကိုကား ပုဂံသို့ ရောက်ရှိလာအောင်ဇာတ်လမ်းဖော်ရဦးမည် ဖြစ်သတည်း။
မြို့ပြနိုင်ငံများ စတင်ထွန်းကားစပြုချိန် ပျူခေတ်က ပုပ္ပားတောင်သည် မည်သို့သော အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း ပြောရန်ခက်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုပေါ်ထွန်းလာခဲ့သော ရှေးဟောင်းမြို့ပြ နိုင်ငံများသည် ပုပ္ပားတောင်နှင့် အတန်ငယ် အလှမ်းဝေးကွာသောကြောင့် ထိုအချိန်ကသမိုင်းတွင် ပုပ္ပားတောင်သည် တိမ်မြုပ်လျက် ရှိနေသကဲ့ သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျူခေတ်တွင် ယင်းအကြောင်းကို ခန့်မှန်းပြောဆိုရန် ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် ပုဂံခေတ် တွင်မူ အလွန်အရေးပါလာခဲ့ကြောင်း မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်းများတွင် အထင်အရှား တွေ့ရှိနေရပေ သည်။ ရှေးဟောင်း မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်းများ အဆိုအမိန့်အရ ပုပ္ပားနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂံခေတ်တွင် ထင်ရှား သော အချက်သုံးရပ်ကို သတိထားမိပေသည်။ ယင်းတို့မှာ (၁) ပျူမင်းထီးလက်ထက်မှစ၍ ပုဂံမင်းများ နှစ်စဉ် ပုပ္ပားတောင်တက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်း၊ (၂) နတ်တောင်ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြလာခြင်းနှင့် (၃) နိုင်ငံရေးအရ ကျောထောက်နောက်ခံ နယ်အဖြစ် အရေးပါလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်သုံးရပ်ကို အနည်းငယ် တိုးချဲ့ ရှင်းလင်းပြပါမည်။
ခေတ်သစ် မြန်မာသမိုင်းဆရာများ အဆိုအရ မြန်မာတို့သည် ပျူတို့နောက်မှ ဤမြေ၊ ဤရေဒေသသို့ ရောက်ရှိ လာ ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး တတ္ထဒေသဟုခေါ်သော ဤအရပ်၌ပင် အရိမဒ္ဒန (ရန်မျိုးနှိမ်) မြို့ဟုခေါ်သော ပုဂံမြို့ တော်ကို တည်ဆောက်၍ အုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ပျူတို့ထံမှ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေများ ကို ရရှိခံ စံခဲ့ကြ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုပ္ပားအကြောင်းကို ပုဂံခေတ်မတိုင်မီက စာပေအထောက်အထား မရရှိ သော်လည်း ပုဂံသူ၊ ပုဂံသားတို့အနေဖြင့်မူ ယင်းတို့ အရင် နေထိုင်သွားခဲ့ကြသော ပျူတို့ထံမှ သိတန်သမျှ သိခဲ့ကြပါမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထိုတောင်ကို နတ်တောင်အဖြစ် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာလည်း ပျူတို့ထံမှ ရရှိသော အမွေပင် ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါမည်။ အကြောင်းမှာ ပျူမင်းထီး လက်ထက် မြန်မာမင်းတို့ ပုပ္ပား တောင်တက်ပွဲကို နှစ်စဉ် စတင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ဆိုလာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (ကုလား၊ ပ၊ ၁၄၂) မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တောင်တက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်ကိုမူ အထင်အရှား မသိရပေ။ စင်စစ်မြင့်မြတ်သော နတ်တောင်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်သာဟု ထင်မိပါသည်။ မည်သည့်နတ် ဟူ၍ အမည်နာမဖြင့် ကိုးကွယ်နေမှုမျိုး စောစောပိုင်းက မရှိသေးဟုလည်း တွေးဆရသည်။
ပျူမင်းထီးနောက် လေးဆက်မြောက် ဖြစ်သော သေဉ်လည်ကြောင်မင်း (အေဒီ ၉ဝ၄) လက်ထက် ရောက်သော အခါ ပုပ္ပား၏ သမိုင်းကြောင်း ပြောင်းလဲစပြုပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သေဉ်လည်ကြောင်မင်းသည် တကောင်းမှ မျောလာခဲ့သော မောင်တင့်တယ် နတ်မောင်နှမတို့နေသည့် စကားပင်ကြီးကို နတ်ရုပ်များထု၍ ပုပ္ပားတွင် တင်ထား လျက် ပြည်သူတို့အား ကိုးကွယ်စေခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အားလည်း မဟာဂီရိ နတ်မောင်နှမဟု တွင်စေ ခဲ့သည်။ မဟာဂီရိ ဟူသည်မှာ ကြီးမြတ်သော တောင်တော် ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ သို့ဖြင့် ပုပ္ပားသည် ပြည်သူတရပ်လုံး ကိုးကွယ်သော မင်းမဟာဂီရိတို့ နတ်မောင်နှမစံပျော်ရာ တောင် တော်ဖြစ်လာခဲ့ လေတော့သည်။ မြန်မာရိုးရာ နတ်ယုံကြည်မှုသမိုင်းတွင် မင်းမဟာဂီရိကို အမည်နာမဖြင့် အစောဆုံး သိရှိခွင့်ရသော နတ်တပါး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနန်းတွင်း၌ မင်းမဟာဂီရိနတ်ကို မန္တလေး ရတနာပုံခေတ်တိုင် စဉ်ဆက်မပြတ် ထားရှိ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြဟန် ရှိပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ယင်းသည် တိုင်းပြည်နိုင်ငံစောင့်နတ်၊ အိမ်စောင့်နတ် (Guardian Spirit) ဟု ယုံကြည်လာခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ မင်းမှအစ ပြည်သူတရပ်လုံး တနှစ်တကြိမ် ထိုနတ်မောင်နှမ ကို ဖူးမြော်ရကြောင်းဆိုသဖြင့်လည်း မြန်မာတို့နတ် ကိုးကွယ်မှု အမြစ်တွယ် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိသာလေတော့သည်။ ယင်းကို အနိရုဒ္ဓနှင့် ရှင်အရဟံတို့၏ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်က ချုပ်ငြိမ်း ကွယ်ပျောက်သွား အောင် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ယနေ့တိုင် မြန်မာအိမ်တိုင်းလောက်နီးပါး၌ အိမ်တွင်းမင်းမဟာဂီရိဟူ၍ ထားရှိကိုးကွယ်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ပုပ္ပားသည် နတ်တောင်ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ပုဂံမင်းဆက်တွင် ပုပ္ပားစောရဟန်းမင်းဟူ၍လည်း မင်းတပါးရှိခဲ့ဖူးရာ ထိုမင်းသည် ပုပ္ပားသားဖြစ်ပြီး ထိုနယ်၏ ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် မင်းဖြစ်လာခဲ့ဟန် တူပါသည်။ ရာဇဝင် တော်ကြီး တွင် ယင်းမင်းဖြစ်ပုံကိုအသေအချာဖော်ပြမထားပေ။ သို့သော် ဥမျိုးမင်းမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသူ မဟုတ်သောကြောင့် မဟာဂီရိနတ်က စကားမပြောဟုဆိုသဖြင့် ယင်းဒဏ္ဍာရီ၏နောက်တွင် တွေးတောစရာများ များစွာ တွေ့ရှိရသည်။ ရာဇဝင်ဆရာကြီး တွင်းသင်းတိုက်ဝန် မဟာစည်သူ (ဦးထွန်းညို) ကမူ ယင်း၏ ရာဇဝင်သစ်၌ ဤသို့ဖော်ပြခဲ့ပေသည်။ ဥမျိုးမဟုတ်ဖြစ်၍ မဟာဂီရိနတ်မထွက်၊ စကားမဆို၊ ပူဇော်ပသဖို့ ချက်သော ကျွဲသား၊ နွားသား၊ ဝက်သား၊ ဆိတ်သား တို့လည်း မကျက်ရှိလေ၍ ပညာရှိတို့ကို မေးတော်မူ သောအခါ “မင်းရိုးမဟုတ်သောကြောင့် နတ်မင်း စကားမဆိုသည်၊ အမဲသား ငါးလည်း ကျက်မြဲမကျက်သည်” ဟုလျှောက်သဖြင့် မင်းရိုးမင်းစဉ် မပျက်ကောင်း ပလေဟု မင်းသားရွှေအုံးသီးကို သမီးတော်နှင့် ဆောင်နှင်း၍ အိမ်ရှေ့ပေးတော်မူ၏။ (ရာဇဝင်သစ်၊ပ၊ ၁၉၆၈၊ ၆၅)
ဤတွင် ပုပ္ပားနတ်သည် ထီးနန်းစိုးစံသောမင်းကို တရားဝင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သူဟူ၍ ယူဆရမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာတော့သည်။ ပုပ္ပားနတ် စကားမပြောသော မင်းသည် တရားမဝင် သို့မဟုတ် မင်းရိုးမဟုတ်ဟု ယူဆရမည် ဖြစ်လာသောကြောင့် နတ်နှင့် မင်းတို့သည် အပြန်အလှန် အားဖြင့် အပေးအယူလုပ်ရန် လိုအပ်လာတော့သည်။ ရာဇဝင်ဆရာ တို့က မင်းရိုးကို နန်းပြန်ရစေလို၍ ဤဇာတ်လမ်းကို ထွင်ခဲ့လေသလော ဟုလည်း တွေးဆဖွယ် ဖြစ်သည်။ မင်းရိုးမဟုတ်ဟု ခေတ်သစ်သမိုင်းပညာရှင်တို့ ယူဆယုံကြည်ထား သော ထိလိုင်မင်း ခေါ် ကျန်စစ်သား မင်းသည် မဟာဂီရိနတ်မင်းနှင့် အကြိမ်ကြိမ် စကားပြောခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပြန်သဖြင့် ထိုမင်းကား မင်းရိုးဟု ဆိုလိုပြန်လေတော့သည် (ကုလား၊ပ၊၂၁၄) ။ ယင်းအသိ ကြောင့်ပင် ပုဂံမင်းတို့ နှစ်စဉ် ပုပ္ပားတောင်တက်ပွဲ ကျင်းပနေကြရ ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရာရောက်တော့ သည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆိတ် စသည်တို့ကို သတ်၍ ပူဇော်ရသောကြောင့်လည်း ဤအလေ့အထ သည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် မည်သို့မျှ ဆက်စပ်၍ မရနိုင် လောက်အောင် ကွဲပြားလျက်ရှိနေပြန်ပါသည်။
ပုဂံခေတ်တွင် ပုပ္ပားကို ပုဂံ၏ နိုင်ငံရေး ကျောထောက်နောက်ခံနယ်ဟူ၍လည်း ယူဆထားခဲ့ကြဟန် ရှိသည်။ အနိရုဒ္ဓမင်းမဖြစ်မီ နောင်တော် စုက္ကတေးနှင့် အာဏာယှဉ်ပြိုင်ကြရမည် ရှိသောအခါ ယင်းသည် ပုပ္ပားသို့ထွက်ခဲ့၍ လူသူအလုံးအရင်း စုခဲ့ရလေသည် (ကုလား၊ပ၊ ၁၆၅) ။ ထို့အပြင် ပုပ္ပားသည် သူရဲကောင်းတို့ ထွက်ရာအရပ် ဟူ၍လည်း ဆိုနိုင်ကောင်းအံ့ထင်ပါသည်။ အနိရုဒ္ဓ၏ သူရဲကောင်းလေးဦးထဲမှ ငလုံးလက်ဖယ် သည် ပုပ္ပားသား ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းသည် ထွန်အရှဉ်း သုံးဆယ်ဖြင့် ထွန်ရေးမှန်အောင် ငင်နိုင်သောကြောင့် လူစွမ်းကောင်း ဖြစ်လာခဲ့ရသည် (ဦးကုလား၊ ပ၊ ၁၇၁) ။ စိုက်ပျိုးရေး အရေးပါသော ခေတ်တွင် ဤမျှစွမ်းအားကြီး သောသူတဦး သူရဲကောင်းဖြစ်သည် ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ထိုက်ပါပေသည်။ အကြောင်းမှာ တနေရာ တမျိုးမျိုးတွင် ခွန်အားပြနိုင်သူမှန်သမျှ သူရဲကောင်း ဖြစ်သောခေတ် ဖြစ်သောကြောင့် တည်း။ ငလုံးလက်ဖယ်သည် တကောင်းမှ ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်၏ စွမ်းအားထက် လူမှုရေးအားဖြင့် အရေးပါ အရာရောက်ပေသည်။ ကျောက်ခေတ်ကစ၍ ကာယဗလကို အခြေခံသော လူစွမ်းကောင်းခေတ် မကုန်ဆုံး သေးကြောင်း၊ အရေးပါဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သာဓကပင် ဖြစ်တော့သည်။ အပြေးသန်လှ မြန်လှသော သထုံမှ ရောက်လာခဲ့သည့် ကုလားငယ် (ဗျတ္တ) သည်လည်း သူရဲကောင်းပင်။ ထို့အပြင် ရေကူးကောင်းသော ညောင်ဦးဖီး၊ ထန်းအတက်ကောင်းသော ငထွေရူး တို့သည်လည်း ထိုခေတ်၏ သူရဲကောင်း များပင် ဖြစ်ကြသတည်း။ ဗျတ္တသည် ပုပ္ပားတောင်မှ စံကားပန်းကို တနေ့ဆယ်ကြိမ် ယူငင်ဆက်ရသည်ဟု ဆိုသည် (ကုလား၊ပ၊ ၁၈ဝ) ။ ထိုဇာတ်လမ်းကို ချဲ့ထွင်စဉ်းစားသော် ပုပ္ပား၏ အရေးပါမှုသည် သမိုင်းတွင် ပိုမိုသိသာ ထင်ရှား လာခဲ့ပြန်သည်။ နတ်တောင်ဖြစ်လာသော ပုပ္ပားမှ (စံကား) ပန်းသည်လည်း တော်ဝင်ပန်း (ဝါ) နတ်ပန်း ဖြစ်လာခဲ့ရ တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးက အမည်မသိစာဆိုတဦးက ပုပ္ပားမှ စံကားပန်းကို ဤသို့လျှင် စာဆိုခဲ့ဖူးလေသည်။
(၁) သိုးကလေ၊ ပုပ္ပားနတ်တောင်
(၂) သိုးကလေ၊ စံကားပွင့်နှင့်
(၃) သိုးကလေ၊ မြိတ်လွတ်စုလည်း
(၄) ဆွေမိမင်း၊ မျက်သုတ်နီစင်
တုမရှိ။ (မြန်မာစာညွန်ပေါင်းကျမ်း၊ပ၊ ၁၅-၁၆)
အစဉ်အလာအရ ပုဂံခေတ်က ကဗျာဟုဆိုသော်လည်း ဝေါဟာရအချို့တို့မှာ ပုဂံခေတ်၌ မတွေ့ရှိရဖူးသေးသဖြင့် ချင့်ချိန်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပုပ္ပားနှင့် စံကားပန်း၊ ပုပ္ပားနှင့် နတ်တောင်တို့ တွဲမိနေသည်ကိုမူ တွေ့ရှိနေရသည်။ စာက ပုဂံခေတ် မဟုတ်သည်တိုင် အကြောင်းအရာက ပုဂံခေတ်ကို ညွှန်းသည်ဟုပင် ဆိုရပါမည်။ သို့ဖြင့် ပုပ္ပား၏ ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများကလည်း နှောင်းလူတို့အတွက် သာ၍ ဆွတ်ပျံ့လွမ်းမောဖွယ်ရာ ဖြစ်လာရ လေတော့သည်။
ထို့ထက် နောက်ကျမည် ယူဆရသော ပုပ္ပားတောင်နှင့် နတ်မောင်နှမဘွဲ့ အချင်းငယ် ကဗျာတပုဒ်ကိုလည်း တွေ့ရှိ ရဖူးသေးသည်။ ထိုကဗျာက ပုပ္ပား၏ ရှေးက အနေအထားကို ဖော်ပြပေးသဖြင့် မျက်မှောက် အနေအထားတို့ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ကြည့်နိုင်ပေသည်။ စင်စစ် ယင်းကဗျာစာပေတို့သည် အင်းဝခေတ်ထက် စောနိုင်စရာမရှိဟု ယုံကြည်ရပါသည်။ နောက်ကျကောင်းသာ နောက်ကျမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုကဗျာ၊ လင်္ကာများသည် ပုပ္ပား၏ ရှေးက ပထဝီဝင် အနေအထားကို ပြောပြနေဘိသကဲ့သို့ ရှိနေပါသည်။ ခံစားကြည့်ပါ။
သာစွလေ (ဦးချမ်းမြနှင့် ဦးမောင်မောင်ကြီး။ ကဗျာလက်ရွေးစင် ခုနှစ်မပါ၊ မျက် ၈)။
ဤအချင်းငယ်သည် ပထဝီဝင်သဘောအရလည်းကောင်း၊ သမိုင်းသဘောအရလည်းကောင်း အရေးပါလေသည်။ ပုပ္ပားတောင်သည် တောဖုံးနေသောတောင် တောတောင်တို့ဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြေနေသောကြောင့် ရာသီဥတုကောင်း သောတောင်၊ ရေထွက်စမ်းများဖြင့် သာယာလှပသောတောင်၊ ထိုသာယာလှပသောတောင်၌ နတ်မောင်နှမတို့ စံပျော်နေကြောင်းကို ရိုးရိုးနှင့် ယဉ်ယဉ်ကလေး ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ မည်သည့်ခေတ်က မည်သည့်စာဆို ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်ဟု မသိရသော်လည်း ပုပ္ပားနတ်မောင်နှမတို့ကို လူအများတို့ လေးစားယုံကြည်နေကြသည့် အသွင်နှင့် ဓလေ့စရိုက် ကိုပေါ်အောင် ဖွဲ့ဆိုထားသော အချင်းငယ်ကဗျာ ဖြစ်ပါသည်။
ပျူမင်းထီးလက်ထက်တော်ကစ၍ ပုဂံဘုရင်တို့ ပုပ္ပားတောင်တက်ပွဲကို ကျင်းပလာခဲ့ကြရာ ပုဂံပျက်သည့်တိုင် ဓလေ့တခုဖြစ်လာခဲ့ဟန် ရှိသည်။ သို့သော် မည်သည့်လတွင် ကျင်းပခဲ့သည်ဟု အစောပိုင်းက ဖော်ပြခြင်းမရှိ၍ မသိရချေ။ ပျူမင်းထီးလက်ထက်က ပုပ္ပားတွင် မဟာဂီရိ နတ်မောင်နှမတို့ မရှိကြသေး၍ မည်သည့်အကြောင်းဖြင့် တောင်တက်ခဲ့သည်ကိုလည်း ပြောရန်ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် ယုံကြည်မှု တရပ်ကိုအခြေခံနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကား မှန်းဆ၍ရပါသည်။ တနည်းလည်း ပုပ္ပားကို မြင့်သောမြတ်သော (နတ်) တောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းကား ထင်ရှားစွာ မြင်သာနေပြီဖြစ်ပါသည်။
သေဉ်လည်ကြောင်မင်းလက်ထက် မင်းမဟာဂီရိတို့ ရောက်ရှိလာသဖြင့် ထိုအခါတွင်မှ ပုပ္ပားသည် နတ်တောင်ဟု ထင်ရှားဖြစ်ပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ စင်စစ် မဟာဂီရိ ဟူသည်မှာ “ကြီးမြတ်သောတောင်” ဝါ “တောင်ကြီး” ဟူ၍သာ အဓိပ္ပာယ် ထွက်ရှိပါသည်။ နတ်တောင် ဖြစ်လိုသောအခါမှ ဇာတ်လမ်းဆင် ဖော်ပြလာခြင်းဟု ထင်ရပါသည်။ မဟာဂီရိသည် ပါဠိဘာသာစကားဖြစ်၍ ပါဠိစာပေ ထွန်းကားလာပြီး နောက်ပိုင်းမှ ဤဇာတ်လမ်းများသည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါမည်။ ဤတွင် ပိဋကတ်စာပေသည် အနိရုဒ္ဓ သထုံကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်သောအခါမှ ရရှိသည် ဆိုကြပြန်သောကြောင့် အနိရုဒ္ဓမတိုင်မီ မဟာဂီရိ ဝေါဟာရ မရှိနိုင်လောက်သေးဟု ဆိုရမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နောက် မညီညွတ်ကြပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုဇာတ်လမ်းသည် ပုဂံခေတ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျပင် ဖြစ်တော့သည်။ အထူးသဖြင့် ပါဠိစာပေ ထွန်းကားစဖြစ်သော အနိရုဒ္ဓနန်းစံ နောက်ပိုင်းတွင် လေးစားရိုသေထိုက်သည်မှန်သမျှ ပါဠိစကားလုံးများဖြင့် နေရာပေး ဖော်ပြလာသောကြောင့် မြန်မာတို့ ပါဠိစာပေကို များစွာလေးစား အထင်ကြီးကြောင်း သိသာထင်ရှားပေ သည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓသာသနာဖြင့် ယှဉ်လျက် နတ်ကိုးကွယ်မှု ဓလေ့ဟောင်းကြီးကို ဆက်လက် သယ်ဆောင်လာခဲ့ သည်မှာ မြန်မာမင်းတို့၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် တခုဟုပင် ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာမင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်လာခဲ့ကြသော်လည်း နတ်ဓလေ့ဟောင်းကို မစွန့်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် ပြည်သူတို့လည်း ယနေ့တိုင် တမျိုးသားလုံး နတ်ယုံကြည်မှုကို မစွန့်နိုင် ဖြစ်နေခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါမည်။ စင်စစ် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် ရိုးရာနတ်တို့မှာ မည်သို့မျှ တွဲဖက် မမိလှချေ။
ဤတွင် ပုပ္ပားတောင်အမည် ပေါ်ပေါက်လာပုံကို ဆိုရပါဦးမည်။
ပုဂံမတိုင်မီက ပုပ္ပားတောင်ကို မည်သို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသနည်း။?
ဤမေးခွန်းကို ဖြေဆိုကြည့်ရန် ကြိုးစားကြည့်သော် လည်း ကျေနပ်ဖွယ် မတွေ့ရှိရပါ။ ပုဂံခေတ် ကျောက်စာတို့တွင်ပင် ပုပ္ပားအမည်ကို မတွေ့ရှိရဘူးသေးပါ။ ဧရာဝတီကို “မြစ်ကြီး” ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသကဲ့သို့ ပုပ္ပားတောင်ကိုလည်း “တောင်ကြီး” ဟူ၍သာ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြမည် ထင်ပါသည်။ ပါဠိ စာပေ ပိုမိုထွန်းကားလိုက်စားလာသော ပုဂံခေတ်နှောင်း (သို့မဟုတ်) အင်းဝခေတ်လောက်တွင်မှ ရေးကြီးခွင့်ကျယ် ဒေသများကို ပါဠိစာလုံးများဖြင့် ရှေးကထက် ပိုမိုကင်ပွန်းတတ် ခေါ်ဆိုလာကြမည် မှန်းဆရပါသည်။ သို့ဖြင့် မြစ်ကြီးကို “ဧရာဝတီ” တောင်ကြီးကို “မဟာဂီရိ” ဟူ၍ ပါဠိဘာသာ ပြန်ဆိုခဲ့ကြဟန် ရှိပါသည်။ တနည်းလည်း ပန်းတို့ ပွင့်လန်းရာတောင်ဖြစ်သောကြောင့် ပါဠိလို ပုပ္ဖဂီရိ ပန်းတောင်ဟု ခေါ်လာခဲ့ကြရာမှ ပုပ္ပားတောင် ဝါ ပုပ္ပားတောင် ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟူ၍လည်း တွေးဆရနိုင်ပါသည်။ တောင်အမြင့်ထက်တွင် ပွင့်သောပန်းကိုလည်း နတ်ပန်းဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါမည်။
ပုပ္ပားတောင်မှ စံကား (နတ်) ပန်းသည် အနိရုဒ္ဓလက်ထက်တွင် တော်ဝင်ပန်းဖြစ်လာခဲ့ပုံ သဘောကို မြန်မာရာဇဝင် ဆရာများက ဖော်ပြကြသည်။ နောက်ပိုင်း မင်းတို့လက်ထက် ပုပ္ပားတောင်မှ မဟာဂီရိနတ်ကို သွားရောက် တွေ့ဆုံကြ ကြောင်း၊ မဟာဂီရိနတ်နှင့် ဘုရင်တို့ စကားပြောဆိုကြကြောင်းများကိုလည်း မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးတွင် အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ရှိရလေသည်။ ဘုရင်များက နတ်နှင့် တွေ့ကြသည်မှာ ပြည်သူတို့က မင်းဧကရာဇ်ကို ပိုမိုခန့်ညား လေးစားလာ စေရန် ဖြစ်သည်။
ရာဇဝင်တော်ကြီးအလိုအရ မြန်မာမင်းတို့ နတ်နှင့် တွေ့ဆုံကြသောလမှာ နတ်တော်လ ဖြစ်သည်။ နတ်တော်လသည် နတ်နှင့် ဘုရင် (တော်) တို့ တွေ့ဆုံရာလကို ခေါ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ် ထွက်ရှိမည် ထင်ပေသည်။ ဆောင်းကာလဖြစ်၍ ရာသီဥတု ခြေခင်းလက်ခင်း သာသောအချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဦးကုလားက “နတ်တော်လရောက်လတ် သော် မင်းတကာတို့သည် ပုပ္ပားတောင်သို့ တက်မြဲဖြစ်သော ကြောင့် အစဉ်တိုင်း ပုပ္ပားသို့ တက်တော်မူလေသည် (ကုလား၊ပ၊ ၂၇၉၂၈၉)” ။ ဤသို့ဖြင့် ဥဇနာမင်းကြီး ပုပ္ပားတောင်သို့ ကြွချီတော်မူလာစဉ် တောင်၏မြောက်ဘက်ရှိ ဆိတ်ထိန်း ကမ်းဖြူအရပ်မှ အမျိုးသမီးငယ်တဦးကို တော်ကောက်ယူတော်မူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်(ကုလား၊ပ၊ ၂၈ဝ)။ ဤကား ပုဂံရာဇဝင်ထဲတွင် တွေ့ရှိရသော ပုပ္ပားတောင် အကြောင်းတည်း။
ပုဂံသည် အနိရုဒ္ဓလက်ထက်၌ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် ပုဂံပြည်သူတရပ်လုံး ဗုဒ္ဓသာသနာ သက်ဝင်ယုံကြည်လာကြသည်ဟုဆိုသည်။ ပုဂံရှိ ဘုရားပုထိုး စေတီတို့ကလည်း ပြည်သူတရပ်လုံး ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ၌ တည်နေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေဘိသို့ ရှိပါသည်။ သို့သော် ပုပ္ပားနှင့် သက်ဆိုင်လာသော အခါ၌မူ သာသနာ မရောက်မီကရှိခဲ့သော နတ်ယုံကြည်မှုဓလေ့သည် မင်းနှင့်တကွ ပြည်သူတုိ့ကြားတွင် ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဟန် ရှိပါသည်။ စင်စစ်မူ မင်းတိုင်းကား ဤသို့မဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။ ရာဇဝင်ဆရာက ပုဂံမင်းနှင့် ပုပ္ပားနတ်တို့ကို တွဲ၍ပြခဲ့သော အရေအတွက်မှာ အနည်းငယ်မျှသာ ရှိခဲ့ပါသည်။
ဤတွင် ကျန်စစ်သားဟု အသိများသော ထိလိုင်ရှင်ကို မဟာဂီရိနတ်နှင့် စကားပြောသူအဖြစ် တခမ်းတနား ဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ ပုပ္ပား စောရဟန်းနှင့်တုန်းက မင်းမျိုးမဟုတ်၍ စကားမပြောချင်ဟုဆိုသောနတ်သည် ကျန်စစ်သားမင်းနှင့်မူ စကားဆို ပြန်သောကြောင့် ယင်းကို မင်းမျိုးဟု သတ်မှတ်စေလို၍ ပေလော တွေးဆဖွယ် ဖြစ်လာပါသည်။ မဟာဂီရိသည် ကျန်စစ်သားကို ဒုက္ခအပေါင်းမှ အကြိမ်ကြိမ် ကယ်ခဲ့သည့် နတ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖော်ပြချက်က ကျန်စစ်သားမင်းကို ဘုန်းတန်ခိုးကြီးကြောင်း ပေါ်လွင်စေလို၍၊ သို့မဟုတ် မင်းမဟာဂီရိနတ်ကို လူတို့က ပိုမိုပူဇော် ပသလာစေလို၍ ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။
ယင်းတို့နှစ်ဦးသည် ရှေးက ရှင်အရဟံနှင့်အတူ ဆုတောင်းဖက်များဟုဆိုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ရာဇဝင်ဆရာတို့က အကြောင်းတခုကြောင့် ကျန်စစ်သားကို မျက်နှာလိုက်ခြင်းပေလော တွေးဆဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ စည်သူ (၁ ) လက်ထက်တွင် မဟာဂီရိနတ်သည် ပို၍ပင် ကြီးကျယ်လာခဲ့တော့သည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းသည် စည်သူ (၁) ၏ ဆရာလေးဦး စာရင်းတွင် အပါအဝင် ဖြစ်လာသောကြောင့်တည်း။ ထိုစည်သူ (၁) ၏ ဆရာများမှာ ရှင်အရဟံ၊ စိမ်းညက်မင်း သားတော် မဟာထေရ်၊ ရှင်အာနန္ဒာနှင့် မင်းမဟာဂီရိ တို့ဖြစ်သည် (ကုလား၊ပ၊ ၂၂၁) ။ ဤတွင် မင်းမဟာဂီရိကို ရဟန်း သံဃာတော်များနှင့် တတန်းတစားတည်း ထားဘိသကဲ့သို့ ရှိတော့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပုဂံခေတ်တွင် (ကျောက်စာတို့၌ မတွေ့ရှိရသော်လည်း) နတ်ကိုးကွယ်မှုသည် ယုတ်လျော့သွား ခဲ့သည်မရှိဘဲ သာသနာ မရောက်မီကကဲ့သို့ပင် အားကောင်းဆဲဟူ၍သာ ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်မှာ ပုပ္ပားနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂံခေတ်ရေး ကျောက်စာတို့တွင် တကြိမ်မျှ မတွေ့ရှိရဘူးသေးချေ။ မင်းမဟာဂီရိ နတ်မောင်နှမနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ထို့အတူသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းတို့ကား များပြား လှသည်။ ကျောက်စာတွင်မပါ၍ မယုံကြည်ရဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း နတ်ယုံကြည်မှုကို ပုံဖော်ရာ၌မူ ပညာသားပါလှ သည်ဟု ဆိုရမည်ထင်မိပါသည်။ ပုဂံရှိ သာသနိက အဆောက်အအုံတို့က အနိရုဒ္ဓနှင့် ရှင်အရဟံ တို့၏ လုံ့လဥဿဟ ကြောင့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ပွင့်လင်းစည်ပင်လာခဲ့ရသည်ကို သက်သေပြနေဘိသို့ ရှိပါသည်။ တဖက်တွင် လည်း နတ်ကိုးကွယ်မှုကို အားပေးထားကြောင်း ပုပ္ပားတောင်က သက်သေပြလျက် ရှိနေပြန်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပုပ္ပားသည် လောကီပညာရပ်များ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရာဟူ၍လည်း ယုံကြည်ရသည်။ ကျန်စစ်သားက ငရမန်ကိုတိုက်ရန် ထီးလိုင်ဘက်တွင် စည်းရုံးနေရချိန်တွင် ဆရာရှင်ပုပ္ပားက ယတြာများစီရင်ပေးရ ကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရဖူးသည် (ကုလား၊ ပ၊ ၂ဝ၉)။ ဤမျှ အရေးပါခဲ့သော ပုပ္ပားတောင်သည် ပုဂံခေတ်ကုန်သော အခါ အဓိကရဖြစ် သော အုပ်ချုပ်ရေး အသိုင်းအဝန်းနှင့်တကွ နိုင်ငံရေးဗဟိုချက်သည် အထက်အညာသို့ ရွှေ့ခဲ့ပြီဖြစ်၍ ယင်း၏အရေးပါ မှု အခန်းကဏ္ဍက ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့တော့သည်။ စာပေတွင်လည်း အတွေ့နည်းပါး လာခဲ့ရသည်မှာ ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာ၏ ခေတ်ကာလ တိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏ ပျူတွေဘယ်ပျောက်သွားသလဲ (၂၀၀၆-ခု၊ ဇူလိုင်၊ ပကြိမ်)
တိုးလှ (ပါမောက္ခ၊ သမိုင်းဌာန) မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးမြို့။ ၂၉ သြဂုတ် ၂ဝဝ၁ ၊ ညနေ ၆း ၅ဝ နာရီ။
၀ီကီမြန်မာ အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းမှ ကူးယူသည်။ အချက်လက် အတိကျများအား ၀င်ရောက်ပြင်နိုင်သည်။
DatE Tuesday, July 13, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
အကြောင်းအရာကို ရေရေရာရာ မသိခင်တည်းက ဟောက်ပီးသား။
အလုံးစုံသိတဲ့ထိတိုင်အောင် ဟောက်ချင်နေသေးတယ်။ ဟောက်ချင်တဲ့အကျင့်မပြောက်ဘူး။
မျက်နှာသုန်မှုန်ပြီး သူ့နားကို ကပ်ချင်သူ တယောက်မှမရှိ။
ကိုယ့် အနားမှာရှိနေရင် နေပူတာထက်ဆိုးတယ်။ အပေါ်ဆီးက ဟောက်စား။
တခါလောက် သူတင်ကိုယ်တင် ဖိုက်ထားရင် နောက်ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကို ပြသနာမရှာတော့ဘူး။
မှန်လို့ကတော့ ဖိုက် ပီးသားပဲ။ ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေ ပြားပြားကို ၀တ်နေတာပဲ။
အဲဒါကြောင့် သဌေးကတော့ သူ့အုပ်ချုပ်မှုကို ကြိုက်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အခု မရှိတော့ဘူး။
အကြောင်းရာကို မသိခင်တည်းက ဖောရှော လုပ်ချင်နေတယ်။
စိုစိ စိုစိ နဲ့ ကွန်မန်းက မပြတ်သားဘူး။
အလုပ်ကို လုပ်တတ်ပေမယ့် မရောရမယ့်နေရာရော။ ဘယ်သူမှ မလေးစေားဘူး။
ပေါင်းရသင်းရခက်တယ်။ ဖိုက်လို့လဲမရ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲကို မသိဘူး။
လိုအပ်တာများ မှာစားချင်တဲ့အကျင့်လေးက ရှိတော့ .. အိုကေ..အဲဒါဆို..အဲလိုလုပ်လိုက်ပေါ့....။
ခပ်တည်တည်မရှိဘူး။ အခုအလုပ် ပြုတ်တော့မယ်။
DatE Saturday, July 10, 20100comments link this
သံယောဇဉ်ကြိုးလေးတွေနဲ့ အနာဂါတ်ကို ပုံဖေါ်ပေးတဲ့အရာ။
အဖြူရောင် အလင်းတန်းလေးတွေနဲ့ အနာဂတ်ကို လင်းလက်စေတဲ့အရာ။
ညီမျှခြင်းကို သက်သေထူတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဥပဒေသ။
ချစ်သူတွေတိုင်းက အလေးထားဦးညွတ်ရတဲ့ နှလုံးသားက လိုက်နာရတဲ့ ဥပဒေ။
နှစ်ယောက်တစ်အိမ်မက် ဘ၀ခရီးကိုဆက်ခဲ့တဲ့ ဆွယ်တော်ရွက်လေးတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု။
DatE Thursday, July 08, 2010 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
DatE Wednesday, July 07, 2010 LaveL personal 1 comments link this
စကားဝါမြေသားလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို မြည်းစမ်ကြည့်ပါစို့......
အထက်ပါ စကားဝါမြေ အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်မှာ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဂျာနယ်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေး စာပေများ၊ ဘာသာပြန်များ၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း၊ သမိုင်း၊ သိုင်းဝတ္တု၊ သုတ၊ ရသ၊ ဟာသ၊ အတ္တုပ္ပတ္တိ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အစရှိသော Ebook စာအုပ်များကို ဒေါင်းလုတ် download လုပ်ကာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်တခု ဖြစ်သလို တဖြေးဖြေးနဲ့ နာမည်ကြီးလာနေပါတယ်။
စကားဝါမြေ နည်းပညာ စာအုပ်စင်
စာချစ်သူ စာဖတ်ပရိသတ် များနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ/ သူငယ်ချင်း အကိုအမ အားလုံးကို ဒီကနေ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့(24.6.2010) ရက်နေ့ မှာ စကားဝါမြေ အွန်လိုင်း မြန်မာစာကြည့်တိုက်မှ ထပ်မံပြီး စကားဝါမြေ နည်းပညာ စာအုပ်စင်လေး အသစ် ထပ်မံ ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်လှမ်းမှီရာ အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများကို တတ်နိုင်သလောက် စုဆည်းပီး တင်ဆက်လိုက်ခြင်းပါ ခင်ဗျာ။ လိုအပ်တာတွေ မပြည့်စုံမှုတွေ ရှိနေဦးမှာပါ။ ဒါတွေကို Cbox မှာ ဖြစ်စေ Comment ရေးခြင်း ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ sagarwarmyae@gmail.com သို့ စာရေးသား ပေးပို့ ၍ ဖြစ်စေ ပေးပို့အကြံပြုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပြုချက် ဝေဖန်ချက်တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အလုပ်ကို တွန်းအားပေးစေတဲ့ အားစေတွေပါ။
"ဘာသာစကား မလိုတဲ့ ဂီတသံစဉ်တွေဟာ လူသားတိုင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တေးသီချင်းတွေ နဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ အမောတွေကို ပြေပျောက်စေသလို ကလေးဘ၀ကစလို့သားချော့တေး လေးတွေ နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုး တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စကားဝါမြေ တေးဥယျဉ်လေးကို ရောက်လာတဲ့ မိတ်ဆွေ အားလုံးရဲ့ဘ၀အမောတွေ ကို ချွေးသိပ်ပေးရာ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ခွင့် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေနပ်လျက်ပါ.....။"
DatE Tuesday, July 06, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာမှာ ကမ္ဘာကတောင် သိတဲ့ သူမပေါ့..
သူမဟာ တစ်ဘဝက အလျှံတငြီးငြီးနဲ့ ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ မီးတောင်ကြီးရဲ့ညီမပေါ့..
အခုတော့ စိမ်းစိမ်းစိုစို နဲ့ မြပုဝါကိုခြုံလို့ လှပနေလေရဲ့..
အညာရဲ့ အိုအေစစ်လို့ တင်စားခံရလောက်အောင် စိမ်းစိုပြီး တောပန်းရနံ့တွေ လှိုင်နေတဲ့ သူမရဲ့အတိတ်ဟာ ပန်းစားဘီလူးများရဲ့ ပျော်စံရာတဲ့လေ …
ပုဂံရာဇ၀င်ထဲက ကိုဗျတ္တနဲ့ မယ်ဝဏ္ဏဇာတ်လမ်းဟာ မြန်မာတွေရင်ထဲ ခုထိနွေးဆဲပေါ့…
ကျောက်နွားသိုးကိုးကောင်နဲ့ ပဟေဠိဆန်တဲ့ ဒဏ္ဏာရီနဲ့ သူမ..
စေတီကျောင်းကန်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေရဲ့ ထွက်ရာလမ်းကိုပါရမီဖြည့်တဲ့ သူမ..
ဗုဒ္ဓ သာသန အရိပ်နဲ့ ချွေးသိပ်ပေးတဲ့ သူမ..
မြန်မာပြည် တစ်နံတစ်လျှားနဲ့ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားတွေ စည်ကားတဲ့ သူမ…
ဟာနုမာ၇ဲ့အမျိုးတွေနဲ့ ဝေစည်တဲ့ သူမ…
စကားပွင့်တွေကို ပုလင်းထဲထောင်ချပြီး အလှဆင်တဲ့ သူမ..
ရာသီစာ သြဇာ၊ မာလကာနဲ့ပိန္နဲ၊ သရက်၊ သင်္ဘော၊ ငှက်ပျော၊ စတော်ဘယ်ရီက အစ ကြွယ်ဝလှတဲ့ သူမ။
တောတောင်လျှိုမြောင်တွေကြားက ရေထွက်စိမ့်စမ်းများနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလှဆင်တဲ့ သူမ..
ကျေးငှက်သာရကာတို့ရဲ့ တေးသံနဲ့ ခွန်းချိုဖွဲ့တဲ့ သူမ ..
ကျောက်တုန်းတွေကိုထုဆစ် အိမ်အဖြစ် ဖန်ဆင်းတဲ့ သူမ…
မြင်းခြံ ကျောက်ပန်းတောင်း ကားလမ်းရဲ့နံဘေးမှာ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးထိုင်နေတဲ့ သူမ..
သူမထံမှာ ကျွန်တော်ခဏသာ နားခိုဖူးပေမယ့် တစ်ဘ၀လုံး တသသစွဲလန်းနေမိတဲ့ သူမ..
သဘော မနော ဖြူစင်ပြီး ရိုးသားလှတဲ့ နှလုံးသားများနဲ့ သူမ…
သူမ.. သူမ.. ကျွန်တော် အရမ်းပဲ သတိရနေမိတယ် …
အနော်ယထာ၌ တာဝန်ကျစဉ် သတိတယ
ဘလော့ဂ် ရေးရင်း ခင်မင်ခွင့်ရသော မိတ်ဆွေ ကိုဇော်နိုင်ထွန်းမှ ပုပ္ပါး (သို့) စကားဝါမြေ ဆိုတဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာလေးကို မေးဖြင့် မျှဝေပါတယ်။ ခွင်ပြုချက်ယူကာ တင်လိုက်ပါတယ်။
DatE Monday, July 05, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
ယမန်နေ့က စင်္ကပူနိုင်ငံ ပင်နီဆူလာ ပလာဇာတွင် ပြုလုပ်သည့် ဇာတိမြေ အကျိုးသည်ပိုးလိုသော ကျောက်ပန်းတောင်းသူ/သားများ၏ အဝေးရောက်ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း တွေ့ဆုံပွဲ အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ကြောင်း။
အဝေးရောက် ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်းမှ ဇာတိမြေ၏ လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အကူညီများ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အများသဘောတူဆုံးဖြတ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အခြေခံဖွဲစည်းသော်လဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး နိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ ကျောက်ပန်းတောင်း သူ/သားများ ပါဝင်ပူးပေါင်းကြရန် ဖိတ်ခေါ်ထား။ ယမန်နေ့ စာရင်းအရ အခိုင်မာအဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၃၀ ရှိ။
အားလုံ တက်ညီလက်ညီ လာရောက်ကြတဲ့ အကို အစ်မများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိ။ မအားလုပ်သဖြင့် မလာရောက်နိုင်သော အကိုအစ်မများလဲရှိ။ လက်လှမ်းမှီရာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျောက်ပန်းတောင်း သူ/သား များအား ဇာတိမြေ အကျိုး သည်ပို့နိုင်ရန် နိုးဆော်ပေးရေး တိုက်တွန်းစကားဆို။
အဝေးရောက်ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကျွန်တော် မောင်ဆန်းဝင်း တက်ရောက်ခဲ့။
လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ် သတင်းများ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ။
*သင်ဘာရည်ရွက်ချက်နဲ့ လူဖြစ်နေသလဲ - သီတဂူဆရာတော် *
အားလုံးသော လူတိုင်း လူတိုင်းကိုပေါ့ ဘာရည်ရွက်ချက်နဲ့ လူဖြစ်နေသလဲ? လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွက်ချက်က ဘာလဲ? လို့မေးရင် တိကျမှန်ကန်စွာ ဖြေနိုင်ဖို့တော့ ခက်ခဲမယ် ထင်ပါရဲ့
လူတစ်ယောက်ကို မေးမယ် သူက ဆရာဝန်ကြီး လုပ်မယ်၊ တစ်ယောက်က အင်ဂျင်နီယာ၊ တစ်ယောက်က ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက်က သတင်းစာဆရာ ဘာ ညာ စသဖြင့်ပေါ့ သူတို့တွေ အားလုံးရဲ့ ရည်ရွက်ချက်တွေ မတူညီတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တူညီမူ မရှိဘဲ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ ဒီလိုဆိုရင် လူတစ်ထောင်ရှိရင် ရည်ရွက်ချက် တစ်ထောင် ထွက်လာနိုင်တာ ပေါ့နော်။
လူသားတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသင့်တာပေါ့။ အဲဒီ ရည်ရွက်ချက်က လူသားအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ common ဖြစ်တဲ့ ရည်ရွက်ချက် ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီ ရည်ရွက်ချက်က ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် တို့များရဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်က ဟောထားပါတယ်။ အားလုံးလဲ သိကြ၊ ရဖူးကြမှာပါ ပရိတ်ကြီးးထဲက ရတနာ့ သုတ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။
လောကတ္ထစရိယ၊ ဥာတတ္ထစရိယ၊ ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာတိ တိေဿာ စရိယာယော......လို့
ချစ်သူ၊ မုန်းသူ၊ လူကောင်း၊ လူဆိုး၊ ဝေးသူ၊ နီးသူ၊ ဖြူသူ၊ မဲသူ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာအမျိုးမျိုး အသားအရောင် အမျိုးမျိုး၊ လူမျိုး အထွေထွေ ဘယ်မျက်နှာမှ မကြည့်ဘဲနဲ့ အသက်ရှိသတ္တ၀ါ အားလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ငါဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွက်ချက်ကို လောကတ္ထ စရိယ လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလူ့အကျိုးတော့ ငါဆောင်ရွက်မယ်၊ ဟိုလူ့အကျိုးတော့ ငါမဆောင်ရွက်ဘူး ဒီလို မဟုတ်ဘဲ အလွန် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နံပါတ် တစ် လောကတ္ထစရိယ၊ အားလုံး သေသည်အထိ နှလုံးသားထဲမှာ စွဲနေအောင် မှတ်ထားစေချင် ပါတယ်။ တစ်လောကလုံး အတွက် မတတ်နိုင်ရင် နည်းနည်းလေး လျှော့လိုက်၊ ဒုတိယက ဥာတတ္ထစရိယ တဲ့
ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများ အတွက် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်အောင် အားထုတ်ခြင်း၊
(၁) တစ်တိုင်းလုံး တစ်ပြည်လုံးမှာ ရှိတဲ့ လူသားအားလုံးတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ငါဆောင်ရွက်မယ်။
(၂) အဲဒီလောက် မလုပ်နိုင်ရင် ဘယ်လောက် လုပ်မလဲ၊ ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာက ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုး များရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် ငါဆောင်ရွက်မယ်။ ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ပါးနော် အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ပါးစလုံးက ပရဟိတ တွေချည်းပဲ။
မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ သူ့အတွက် ဗုဒ္ဓ ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ “ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ” လို့ ပြောတာနော်၊ အဲဒါကို ဦးဇင်းတို့ စာဖတ်သူတို့နဲ့ ကိုက်ညီအောင် စကားလုံးပြောင်းပြီး ပြောရမယ် “အတ္တတ္ထ စရိယ” လို့။ အတ္တတ္ထ စရိယ - မိမိ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်နော်
ငါသည် လောကလူသားအားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှါ လူဖြစ်လာတာ လောကတ္ထစရိယ၊ အဲဒီလောက် မတတ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ငါသည် ငါ့ရပ် ငါ့ရွာရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် လူဖြစ်လာတာ ဥာတတ္ထစရိယ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ပါးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက် လူသား တစ်ယောက်သည် ဘာလုပ်ရမလဲ အတ္တတ္ထ စရိယ - မိမိရဲ အကျိုးစီးပွါး ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်။ အတ္တတ္ထ စရိယ- ကိုယ်ကျိုး စီးပွားလို့ ဆိုလိုက်လို့ စာဖတ်သူတို့ တစ်မျိုး သွားပြီးတော့ စိတ်မကူးနဲ့နော်၊ ငါ တိုက်ဆောက်ဖို့ ကားစီးဖို့ အရင်လုပ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး သွားမတွေးနဲ့၊ အဲဒါ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပြည့်စုံဖို့၊ သီလ နဲ့ပြည့်စုံဖို့ အရင်လုပ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ သီလ ဆိုတော့ ဒို့ သီလ မတတ်နိုင်ဘူးလို့ ဒီလို သွားမတွက်နဲ့။
သီလဆိုတာ ဘာလဲ လို့မေးရင်
Bodily discipline and Verbal discipline.
This is Sila.
Bodily discipline- ဆိုတာ ကိုယ်၏ စည်းကမ်း၊
Verbal discipline- ဆိုတာ ပါးစပ်စည်းကမ်း အဲဒါကို သီလ လို့ခေါ်တယ်။
ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ- အသက်ရှိသတ္တ၀ါတွေကို မသတ်ဘူး
Not to kill any living beings.
အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ- ပိုင်ရှင် မပေးတဲ့ပစွည်း ဘာမှ မယူဘူး၊
Not to take anything, not given by owner.
Not to do sexual misconduct -သူတပါးသားမယားကို မဖျက်စီးဘူး
လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အကျင့်ကို မကျင့်ဘူး ဒါတွေဟာ ကာယကံ စည်းကမ်း၊
နောက် ဒုတိယ က
Verbal discipline- ပါးစပ်စည်းကမ်း
မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ -မဟုတ်မမှန်တဲ့ စကားကို မပြောဘူး
I undertake the precept not telling lie.
ရှင်းအောင် ထပ်ပြောကြစို့ ဘုန်းကြီးပြော ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ မုသာဝါဒါ၊ ပိသုဏ၀ါစာ၊ ဖရုသ၀ါစာ၊ သမ္ဖပ္ပလာပ၀ါစာ လို့လာပါတယ်။ ဒါကို ခေတ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြောရရင်
မှန်တာကို ပြော၊ မှန်တိုင်းလည်း ပြောရမလား ဆိုတော့ မှန်တိုင်းလည်း မပြောနဲ့တဲ့ မှန်တာတွေ အကုန်လျှောက်ပြော နေလို့ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်လား။
ရိုးရိုးသားသား ပြော၊ ရိုးသားတဲ့ စိတ်နဲ့ပြောတဲ့
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြော တဲ့ ဒီလောက်နဲ့ ဒီစကားဟာ လုံလောက်ပြီလား ဆိုရင် မလုံလောက် သေးဘူး
Must be beneficial for others and oneself.
မိမိအတွက်ရော သူတစ်ပါးအတွက် အကျိုးဖြစ်မယ့် စကားကို ပြောရမယ်။
Must be harmonious
ညီညွတ်ရမယ် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ရမယ့် စကားမျိုးတွေ သွားမပြောနဲ့ ချစ်ခင်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက် ကွဲသွားအောင် သွားမပြောနဲ့ ကွဲနေတဲ့လူကို စေ့စပ်တဲ့ စကားမျိုးပဲပြောတဲ့
စကားအရာ အင်္ဂါ ခြောက်ပါးနော် နှလုံးသားထဲမှာ စွဲနေအောင် ဖတ်ပါ မှတ်သားပါ၊ သုဘာသိတာစ ယာဝါစာ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံ ဆိုတာ ဘယ်လောက် ကောင်းသလဲ၊ စကားကို ကောင်းစွာ ပြောခြင်းသည် သုဘာသိတ မင်္ဂလာ ဖြစ်နေတယ်တဲ့ ဘယ်လောက် လူတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အဆုံးအမ တွေကို မြတ်ဗုဒ္ဓ ဆုံးမတော် မူထားသလဲ?
သီတဂူဆရာတော် ဘုရား၏ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်တွင် ဟောကြားအပ်သော တက္ကသိုလ် တရားတော်။
DatE Sunday, July 04, 2010 LaveL သီတဂူဆရာတော်0comments link this
မြန်မာဖောင့် ဇော်ဂျီမှာ သုည(၀) နဲ့ ဝလုံး(ဝ) အကြောင်းကို
ဘလော်ဂါဘိုးအေ ကိုညီလင်းဆက် Search engine အကြောင်းတွေရေးတဲ့ ပိုစ်တစ်ခုမှာဖတ်ပြီး သတိထားဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။
ကိုယ်တိုင်တော့ မောင်ဆန်းဝင်းလို ဝင်း စကားလုံး ရေးတဲ့အခါ ဝလုံး(ဝ)သုံးရမှာတွေကို သုည(၀) ကိုသုံးပြီး ရေးနေတာ အခုချိန်ထိပဲ။
တကယ်တော့ လက်ကအကျင့်ပါနေတာရယ် အပျင်းထူနေတာရယ်ကြောင့်ပါ။
အခုတော့ ကျွန်တော် အမှန်တိုင်းလေး လိုက်ရေးတော့မယ်။ အခုကစလို့ ဝလုံး(ဝ) တစ်လုံး အမှန်သုံးကာ မောင်ဆန်းဝင်း၊ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း၊ ရာဇာနေဝင်း၊ ဝါဝါဝင်းရွှေ၊ ဝင်းဝင်းဝါဝါ၊ ဝေးဝေးမသွားနဲ့၊ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝလုံးကို သုံးတော့မယ်။
ဇော်ဂျီ font ကို သုံး၍ရေးရာတွင်
၀(သုည) ကိုရေးလိုက (number0key) ကိုသုံးပြီး
ဝ(ဝလုံး) ကိုရေးလိုက (Shift + < key) ကိုသုံးရပါတယ်။
DatE Friday, July 02, 2010 LaveL ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ0comments link this
ခေတ်ဆိုသောအရာနှင့် အတူလိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့မြို့။
လှူဖို့ တန်းဖို့ ကြိုးစားပြီး စုဆောင်းနေတဲ့မြို့။
လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ လူတွေများတဲ့မြို့။ အရက်ဆိုင်တွေ ပေါတဲ့မြို့။
လမ်းတွေမှာကတ္တရာ အပေါက်တွေဗလပွနဲ့ မြို့။
ပျံကျဈေးမှာ ဘယ်တော့မှ ဈေးဆစ်လို့ မရတဲ့မြို့။
ထွေးညို မိတ်ကပ်လူး သလို ချက်အရက်ကို ဘီအီးရောရောင်းတဲ့မြို့။
အရက်ကောင်းဆို အစစ်ရခဲတဲ့ မြို့။
ကုန်တင်ကားတွေပေါတဲ့မြို့။ ကားဘီးဘယ်လောက်လှိမ့်လိုက်ရင် ငွေ ဘယ်လောက်ရတယ် ဆိုတာလောက်ကို တွတ်စက်မကူဘဲ အလွတ်ရတဲ့မြို့။
ယောက်ျားသားတွေ ရွှေအ၀တ်များတဲ့ မြို့။
စေတီတွေမှာ ညဘက် ပုတီးစိတ်တတ်တဲ့ မြို့။
ဘိုးတော်အားကိုး နဲ့ ရေနံတူးဖို့ စီရင်နေတဲ့ မြို့။
ဂျစ်ကားတွေနဲ့ ဇိမ်ခံပြီး လျှောက်လည်တတ်တဲ့မြို့။
နိုင်ငံခြားဆို မလေး နဲ့ စကာင်္ာပူ ထည်လဲသုံး အခေါက်ခေါက် ပြောနေတဲ့မြို့။
ရွာတွေမှာထန်းတတ်ဖို့ယောက်ျားတွေ မလေးရှား ရောက်သွားလို့ အဓိကထွက်ကုန် စံချိန်ကျခါနီးမြို့။
မုန့်ဟင်းခါးဆို အရည်ပျော်မှကြိုက်တဲ့မြို့။ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေ မှာညနေဘက် ဗိုက်စည်းဇိမ်ခံနေရရင် ကျေနပ်နေတတ်တဲ့မြို့။
အလှူဆိုလျင် အလှည့် ကြီး ထည့်ရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့မြို့။
အခြောက်ကို မုန်းပေမဲ့ အခြောက် အက တော့ ကြိုက်တဲ့မြို့။
မကျည်းဈေးကို အသေအချာတွတ်ချက်တတ်မှ လူရာဝင်တဲ့မြို့။
ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိမှ စကားဆန့် တဲ့မြို့။
ကာလသားတွေ ကွမ်း အစားများတဲ့မြို့။ ကွမ်းယာကောင်းတဲ့မြို့။
လ္ဘက်ရည်(ကျောက်ပန်းတောင်း) ချိုပြစ် ကြိုက်တဲ့မြို့။
အများစု ၀က်သား ရှောင်တဲ့မြို့။
၀က်သားဒုတ်ထိုးဆိုင် ၅ ဆိုင်လောက်ဘဲ ဖျစ်ဖျစ်မြည်ရှိတဲ့မြို့။
ရေသန့် ဆိုတာ မနေ့ တစ်နေ့ ကမှ တွေ့ ပေမယ့် သူမဟုတ်ရင် အဖတ်မလုပ်တော့တဲ့မြို့။
လူတွေ က အင်မတန်ရိုးတဲ့မြို့။
အ၀တ်အထည် တွေဆို အသစ်အဆန်းမှ ဈေးကြီးမှ ကြိုက်တဲ့မြို့။
မီးတစ်ရက်ခြားလာတဲ့မြို့။ လမ်းမီးတွေ ကျို့တို့ ကျဲတဲမြို့။
သင်္ကြန်ဆို ရက်အဆစ် တောင်းချင်တဲ့မြို့။
ကွန်ပျူတာကို စိတ်ဝင်စားစပြုနေတဲ့ မြို့။
အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို မျက်မမြင်ပုဏ္ဏားတွေ ဆင်စမ်းသလို မှန်းစမ်း နေတဲ့မြို့။
တယ်လီဖုန်း အ၀င်အထွက် ခက်တဲ့မြို့။
လူ့ ဘ၀မှာနိုင်ငံခြား ရောက်ဖူးမှ အဆင်ချောသလို တွတ်တဲ့မြို့။
ဗြိတိသျှလို နားမလည်ပေမယ့် ဗန်ဒိန်းကား ၊ဂျိန်းစပွန်းကားမှ ကြိုက်တဲ့မြို့။
လူကဲခတ်ပြီး ဇတ်ကားကို နားလည်နေတဲ့မြို့။
တရားတော်တွေကို ပါဠိလို နဲ့ဗြိတိသျှလိုပြောမှ ကြိုက်တဲ့မြို့။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးကို ရေအိုးရေမှုတ် သွားလာနေတဲ့မြို့။
သင်္ချိုင်း ၃ ခုရှိတဲ့မြို့။ လူသေရင် သုဂတိရှင် ဆိုတဲ့ အသင်းက လိုက်ပို့ ပေးတဲ့မြို့။
သီတင်းကျွတ်ပြီးတာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေ တန်းစီနေတဲ့မြို့။
ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဟွန်းတီးပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့လူက ဖယ်ပေးရတဲ့မြို့။
လမ်းတွေပေါ်မှာအဆင်သင့်သလို ကြည့်မောင်းရတဲ့ နားလည်မှု့မြို့။
လမ်းဘေးမှာ ကိုက္ကိုပင်ကြီးတွေ ရှိတဲ့မြို့။
GTI ကျောင်းသူတွေ ချောတဲ့မြို့။
မြို့ခံမိန်းမလှတွေ အများစုက မိထ္ထီလာ ကျောင်းသွားတတ်ရင်း ကြင်ယာပါ ယူလာကြတဲ့မြို့။
မနက်ဆို သံဃာတွေကို အာရုံဆွမ်းလောင်းတဲ့ အခါတိုင်း ဘာသာရေး သီချင်းလေးတွေနဲ့ နွေးထွေးနေတဲ့မြို့။
တရားပွဲတွေကို သာသနာ့ရက္ခိတ ခေါ်သာသနာတော် စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းမှ ဦးစီး ပြီး ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့မြို့။
ကိုရီယားကား ကို မြို့လုံးကျွတ် မိန်းမသားတွေ ကြိုက်တဲ့မြို့။
အမျိုးသမီးများ တရားစခန်း၊တရားပွဲတွေ အသွားများတဲ့မြို့။
မီးရေးထင်းရေး ဆို ကူညီတတ်တဲ့မြို့။
DatE Thursday, July 01, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
အလုပ်ထဲက သတိပြုစရာ အခြေနေ တခုကို ယှဉ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သဘောင်္ Tank ထဲကို လေမှုတ်သွင်းတဲ့ ventilation ကို အသုံးမပြုခင် မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြု နေဆဲ ventilation ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲစက် အညစ် အကြေး များစွာနဲ့ပေါ့။
လေထုဟာ အရောင်အဆင်း အနံမရှိ သလို မြင်နိုင်တဲ့ အရာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ သတိချပ်စရာပါ။
DatE Sunday, June 27, 2010 LaveL s'pore and job0comments link this
“မယ်ဇလီဖူးသုပ်လေး စားလိုက်ဦး” လို့ ပြောတယ်။
နှလုံးသားမှာ ကြယ်စုံဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ။
မြားနတ်မောင်မင်္ဂလာမဂ္ဂဇင်း၊ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်။
ရေနံချောင်းဇာတိ၊ ပန်းချီဆရာ သန်းမြင့်အောင်(ကဗျာဆရာ သင်းဝေအောင်) ၂၀၁၀ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သွားသည်။
DatE Wednesday, June 23, 2010 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
google map kyaukpadaung.
မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ကျေးရွာ အုပ်စုပြ မြေပုံ။
မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ မြို့ကွက် မြေပုံ။ အကျယ် အ၀န်း ၂.၇၇ စတုရန်းမိုင်။
DatE Monday, June 21, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this
ဘလော့ဂ် တွေကို လျှောက်မလည်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပီ။
စိတ်ပါတဲ့အခါ ၊ အားတဲ့အခါ နည်းနည်း ပါးပါ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အခုမှ သေချာကြည့်မိတယ်။ ဘလော်ဂါ ဆိုဆိုဒ်တီ နဲ့ အတူ ပေါ်လာတဲ့ ဘလော်ဂါတွေ အနားယူကြတာ တော်တော်များ ရှိနေပီ။ ကျွန်တော့် ဘလော့လေးမှာ တွေ့တဲ့သူတိုင်းလင့်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ ဘလော့လေးတွေ လင့်ထားဖြစ်တယ်။ နာမည်ကြီး ဘလော့တွေရောပေါ့ (ဥပမာ။ မခင်ဦးမေ ဘလော့ဂ်)။
မရေးတာ တစ်နှစ်ကြာပီဖြစ်တဲ့ ဘလော့တွေ ဆယ်ခုကျော်ရှိတယ်။ ၆ လ ကျော်မရေးတာလဲရှိတယ်။ ကြိုကြား ကြိုကြားဖုန်ခါတာက တော်တော်များတယ်။ (ကျွန်တော်လဲ အဲဒီထဲပါတယ်ထင်တယ်) ဘလော့ဂ် ဖတ်ချင်လို့ လင့်ထားတဲ့ ဘော်ဘော်တွေ စာရင်းကို ကြည့်လိုက်တယ်။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အသစ် တက်လာတာက လေးငါး ယောက်ပဲရှိတယ်။
ဦးညဏ်နဲ့ အန်တီဝါက အလုပ်တွေ သိမ်းကြုံး လုပ်နေပီ လှည်းတန်းမှာ sakura သွားဆေးခန်း ဖွင့်နေတယ်။ ကိုရွာသားလေး နဲ့ ကိုဝင်းဇော် လဲ ပြောက်နေတယ်။ အစ်မ မသက်ဇင်လဲ ပြောက်သွားတာ တစ်နှစ်ရှိပီ။ ကိုပီကေတစ်ယောက် ပေါ်မလာတာ တော်တော်ကြာပေါ့။
ကိုညီလင်းဆက်၊ မနိုင်နိုင်းစနေ တို့တောင် ပို့စ် အတက် နှေးသွားတယ်။ ကိုတောင်ပေါ်သားကတော့ မနေ့က ဖုန်းခါတယ်။ မောင်လူအေး ဘလော့က ပုံမှန် တက်တယ်။ မနော်ဟရီလဲ ပုံမှန် ပိုစ်တွေ တက်တယ်။ ရွှေမန်းတလေးက ကိုမောင်လှ လဲ ကြိုကြား ကြိုကြား တက်တယ်။
(မဗေဒါ လဲ နာမည်တူပေါ်လာလို့ နည်မည် ပြောင်းထားတယ်။)
အမှားပြင် >> မဗေဒါ နာမည်တူပေါ်လာလို့ ခေါင်းစားခဲ့ရတယ်တဲ့ ဒါပေမယ့် -
မူလလက်ဟောင်း ဘလော့ပေါ်က မဗေဒါက (www.mabaydar.blogspot.com) က မဗေဒါပါပဲ... နောက်ပေါ်လာတဲ့ မဗေဒါကသာ မဗေဒါ(၈၈)(www.mabaydar88.blogspot.com) လို့ရေးပါမယ်လို့ သဘောတူပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ... လို့ဆိုပါတယ်။
သူများတွေ ပြောနေမိတယ်။ ကိုယ်လဲ စိတ်ကူးရမှ ရေးဖြစ်တယ်။
အရှိန်ကောင်းနဲ့ မောင်နှင်နေတာကတော့ မခင်ဦးမေတို့၊ ဆရာကိုသူရိန်တို့ စတဲ့ .. စတဲ့ သူတွေပေါ့ ခင်ဗျာ။
သတင်းတခုကြားထားတာက စင်္ကပူမှာ ဘလော်ဂါ အသစ် တွေ အများကြီးတဲ့။ စင်္ကပူကို မြန်မာ ဘလော်ဂါ မြို့တော်လို့လဲ ခေါ်ကြသတဲ့။ အခုတလော ဘလော့ဂ်တွေ ပြန်ဖတ်ချင်လာတယ်။
လင့်စာရင်းထဲကို ငါးယောက်လောက် ထပ်ဖြည့်ဖြစ်တယ်။ ဂဃနဏ မဖတ်ရသေးပါဘူး။ အေးဆေး ဖတ်မယ်။
DatE Friday, June 18, 2010 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
အဖြူရောင် အတောင်ပံတစုံ တပ်လို့
တမ်းတခြင်း အလွမ်းတွေ ပွေ့ဖက်
ပြာလွင်လွင် ကောင်းကင်ထက် အတူဆုံ
အလွမ်းသင့် ချစ်စကား ဆိုကြမယ်။
ယုယစွာ ထွေးပွေ့ ထားမယ်
DatE Friday, June 18, 2010 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
အနော်လဲ ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ဖူးတယ်. ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက။
ရသေ့တောင် စခန်း တောင်တက်ကားကြီးပေါ်က မရဲတရဲ လှမ်းရိုက်တာ (သူကဆွဲထားပေးတယ်)။
မုတ်ဆိုး ဒူထောက် ဆိုလား ပဲ ရင်ပြင်တော် ပေါ်က လှမ်းရိုက်တာ။
ဘလော်ဂါ ဆရာ တစ်ယောက် ကြွားလုံးကို အားကျလို့ပါ.. ဒီလိုပါပဲ .မရောက်တဲ့သူတွေ . မြင်ကွင်းလေးတွေ ကြည့်ရတာပေါ့ နော် ..
DatE Wednesday, June 16, 2010 LaveL personal0comments link this
အချိန်တွေ ဘာလိုလိုနဲ့ အစ်မကြီးသား တူတော်မောင် ပြည့်ဖြိုးအောင် ဆယ်တန်းအောင်ပြီ..
ကိုယ် ဆယ်တန်းတုန်းက ဂဇက် မကြည့်ခဲ့ရဘူး။ သူများတွေ မြို့ကို ဂဇက် သွားကြည့်ကြတယ်။ ပျော်စရာကြီး။ ကိုယ့်မှာတော့ နွားတရှင်းနဲ့ မြေပဲခင်း ကြားခွဲနေရတယ်။ ဆန်းဝင်း ၂ ဒီ နဲ့ အောင်တယ်တဲ့။
ဂဇက် ကြည့်ပြီး ပျော်ရတဲ့ ဖီလင် မရခဲ့ဖူးပါဘူး။ တူတော်မောင် အောင်တော့ ပျော်တယ်။
အစ်မကြီး မိသားစု အတွက် ပျော်တယ်။ ညီမ ၀မ်းကွဲ တစ်ယောက်လဲ အောင်တယ်။ ဒီနှစ် တော်တော် များများ အောင်တယ်ထင်တယ်။ ဒီလိုပါပဲလေ...
DatE Tuesday, June 15, 2010 LaveL personal0comments link this
လူ့လောကထဲ ရောက်လာပြီး -
၁။ ဗုဒ္ဒ မြတ်စွာဘုရားကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
၂။ အဖေနဲ့ အမေ အဘိုးနဲ့အဖွားကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
၃။ အကို အစ်မ ညီ ညီမ တွေလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၄။ ဆွေမျိုးတွေလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၅။ တစ်ရွာလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၆။ မူလတန်းကျောင်းက ဆရာ ဆရာမ တွေလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၇။ အလယ်တန်းကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၈။ အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၉။ ကောလိပ်က ဆရာဆရာမ၊ အဆောင်ပိုင်ရှင်၊ သူငယ်ချင်းများ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁0။ မေးသမျှ မငြီး မငြူ ဖြေပေးတဲ့ ကိုမော်ကြီးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၁။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က တွေ့ဆုံကြုံကွဲ အပေါင်းသင်းတွေလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၂။ လိမ်ညာ လှည့်စား ကိုယ့်အပေါ်ကျော သွားတဲ့သူတွေလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၃။ ကမ္ဘာလောက ကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၄။ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၅။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၆။ စာပေလောက စာနယ်ဇင်းလောက ကိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၇။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရုပ်သံလိုင်းတွေ သတင်းမီဒီယာတွေလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၁၈။ ဘလော်ဂါ လောကကိုလဲ ကျေးဇူးတင်တယ်။
၂၀။ --------- အများကြီးရှိတယ်။
ကျေးဇူးတင်တယ် ဆိုတာ ကျေးဇူးရှိခဲ့လို့ လို့ ကျေးဇူးတင်တာပါ။ ဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်သလဲ ဆိုရင် ဘယ်အတိုင်းတာထိ ကျေးဇူးရှိလဲ ဆိုတာ နဲ့ ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး ရှိခိုးဦးတင် နေလောက်အောင် ဆပ်မကုန်တဲ့ ကျေးဇူးတွေရှိရင် ရှိခိုးဦးတင်နေမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကား က ကျယ်ပြန့်လှပါတယ်။
DatE Wednesday, June 09, 2010 LaveL ကျေးဇူးစကား0comments link this
လူချွန်လူကောင်း သီချင်းလေးကို ကျွန်တော့်အဖေ အ၇မ်းကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ရွာအလှူဆိုင်းဝိုင်းမှာ သိချင်းတောင်းရင် လူချွန်လူကောင်း သိချင်းကိုပဲ တောင်းတတ်တယ်။ ဆုတော်ငွေချတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အလှူရှိတိုင်း ကျွန်တော့် အဖေ သီချင်းတောင်းရင် လူချွန်လူကောင်းသီးချင်းပါ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်အဖေ သီချင်းတောင်းမယ်ဆိုရင် ရွာကလူတွေလဲ သိတယ်၊ ဆိုင်းဆရာတွေကလဲ သိတယ် ဆုတော်ငွေ မထုတ်ရသေးဘူး သီချင်းကို စတီးနေပီ။
ပြောချင်တာက ရှေးတုန်းက အနုပညာသည်တွေက ပြည်သူ့အတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနိုင်တယ်။ လူကြီး လူရွယ် လူငယ် အတန်းပညာ အနိမ်အမြင့် အားလုံးအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မြင်နိုင်စေတယ်။ ဘ၀ရပ်တည်မှု အတွက် အတုယူဖွယ်တွေ အနုပညာအဖြစ် ဖန်တီးကြတယ်။ စာရေးစာဆရာ သီချင်းရေးဆရာ တွေက သမားဂုဏ် နဲ့အညီ မေတ္တာထားကြတယ် လို့ မြင်တယ်။
အခုခေတ်မှာ အနုပညာသည်တွေ တလွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ လူထုကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖို့ ဆိုတာမရှိဘူး။ အခြေနေကြောင့် နိမ့်ကျတဲ့ ပညာရေးနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ စီးပွားရေးအခြေနေကြောင့် အရာရာမှာ နိမ်ကျနေမှုကို အခွင့်ကောင်းယူကာ လုပ်စားတွေ များလာတယ်။ ဗဟုသုတ နည်းပါမှု နဲ့ ဆင်း၇ဲတွင်းထဲက မတက်နိုင်တာကိုပဲ လက်တွဲကူဖို့ မစဉ်းစားဘူး၊ ဖေးမဖို့ မစဉ်းစားဘူး အတ္တကြီးကြီးနဲ့ ငွေတခုပဲ ကြည့်နေကြတယ်။ မေတ္တာမပါတဲ့ အနုပညာတွေ ပေးနေကြတယ် လို့မြင်တယ်။
ဥပမာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အခုခေတ် သီချင်းတွေကို သတိနဲ့နားထောင်မှ သိလိမ့်မယ် ... ရူးသလို ပေါသလို ဟာသလိုလို နဲ့ မျောလိုက်မိရင် ဘာမှမသိနိုင်ဘူး။ ရင်လေးတယ် ရင်မောတယ် - ရေးချင်သးတယ်..
DatE Tuesday, June 01, 2010 LaveL လူချွန်လူကောင်း0comments link this
ဒီပုံကို ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ရောက်တုန်းက ရေတံခွန်သွားတဲ့ လမ်းဘေးမှာ ရယူခဲ့ပါတယ်။
DatE Saturday, May 22, 2010 LaveL ကျိုက်ထီးရိုးခရီးစဉ်0comments link this
ပိုးလဲရှိတယ်၊ ၀ါသနာ တော်တော်ကြီးတဲ့ ကလေးတွေ။
ဆွဲထားလက်ကိုပဲ ဆွဲထားကိုယ့်လူရေ သီချင်းနဲ့ကနေတာ သဘောကျတာနဲ့ ရိုက်လာခဲ့တယ်။
DatE Friday, May 21, 2010 LaveL ကျိုက်ထီးရိုးခရီးစဉ်0comments link this
တောင်စဉ်ချောင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဟိုးနောက်မှာ ပုပ္ပါးတောင်ကို ရေးရေးမြင်နေရတယ်..
နွေရာသီဆိုတော့ ရေသိပ်မရှိတော့ဘူး. သောက်ရေအတွက် အမြန်ဖေါ်လို့ရတဲ့ လက်ယက်တွင်းလေးတွေရှိတယ်။ ကြက်သွန်ခင်းတွေရှိတယ်. ရှားပင်တွေက ပတ်လည် ၀ိုင်းနေတယ်။
DatE Wednesday, May 19, 2010 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် အတွင်း ပုပ္ပါးတောင်မှစီးစင်းသော ချောင်းဖြစ်သည်။
ပုပ္ပါးတောင်တန်းများမှ အစဉ်မပြတ် စီးစင်းလာသောကြောင့် တောင်စဉ်ချောင်းဟု ခေါ်ကြသည်။
မိုးရွာသီတွင် ချောင်အထက်ပိုင်း၌ မိုးညိုလျှင် သားသမီးများအတွက် မိဘများ စိတ်ပူရသောချောင်းဖြစ်သည်။
နွေရာသီတွင် ချောင်းရေကျကာ ဘေးဘယ်ညာတွင် ကိုင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်သော ချောင်းဖြစ်သည်။
ငါးသလဲထိုး၊ ငါးလူးပေါက်၊ ငါးရံ့၊ ငါးခူ၊ ငါးပြေမ၊ ရေပေါ်ငါး၊ ခဏန်းလက်မ၊ ငါးရှဉ့်ပေါသော ချောင်းဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်က ကျောင်းဆင်းလျှင် လွယ်အိတ်ပစ်ချကာ ငါးဖမ်းထွက်ခဲ့သော ချောင်းဖြစ်သည်။
တောင်စဉ်ချောင်းသည် ရှားပင်လှရွာ၊ ပေါက်ပင်စွန်းရွာ၊ ချောင်းခြားရွာ၊ အောင်ပဒေသာရွာ၊ လက်ပန်ကျင်းရွာ၊ ညောင်ပင်သာရွာ စသည် အစဉ်လိုက် စိးဆင်းကာ ပင်းချောင်းထဲသို့ စီးဝင်သွားသည်။
DatE Tuesday, May 18, 2010 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကြက်မောက်တောင်ဆည် အနီးမှ တောင်နီတောင်အား
ယခုနှစ် မတ်လဆန်းက ဤသို့ တွေ့ခဲ့ရသည်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့မှုနှင့်
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကြက်မောက်တောင်ဆည်- ဆည်ရေသောက်ဧရီယာအတွင်းမှ
DatE Monday, May 17, 2010 LaveL kyaukpadaung0comments link this